ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေးထဲက နှားနို့၊ ဝကျ နှငျ့ ခှေး တို့အကွောငျး – Kyaw Zaw Oo's Blog
April 23, 2017 August 6, 2019 kyaw zaw oo
ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေးထဲက နှားနို့၊ ဝကျ နှငျ့ ခှေး တို့အကွောငျး
ခြေလေးချောင်းတော်လှန်ရေးထဲက နွားနို့၊ ၀က် နှင့် ခွေး တို့အကြောင်း
(written by Kyaw Zaw Oo)
“ကဲ့ယူသော နွားနို့တို့အားဖြင့် အာဏာရှင်လောင်း ၀က်သည် ခွေးပေါက်ကိုးကောင်အား မွေးမြူထားလေရာ၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကြီးမားထွားကြိုင်းလာသော အဆိုပါခွေးကြီးကိုးကောင်ကို မဏ္ဍိုင်ပြုလျက် ထိုဝက်သည် ခြေလေးချောင်းကွင်းတွင် အာဏာရှင်ဖြစ်သွားလေသည်။” ဤသည်မှာ “ခြေလေးချောင်းတော်လှန်ရေး” ၀တ္တု အား ရှုထောင့်တစ်ရပ်မှ ကြည့်မြင်လျက် စာတစ်ကြောင်းတည်းဖြင့် အကျဉ်းချုပ်ကြည့်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
(၂) တော်လှန်ရေးတို့ လမ်းချော်သောအခါ . . .
လူမျိုးတစ်မျိုး၏ လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲသည် ရေရှည်တည်ဆောက်ရသော ခရီးရှည် ဖြစ်လေသည်။ မဟာဗျူဟာမြောက်ရည်မှန်းချက်တို့ဆီ ဦးတည်ချီတက်ရင်း နည်းဗျူဟာများ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွင့်ကာ တည်ဆောက် ချီတက်ကြရသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လီနင်၏ အယူအဆအတိုင်းဆိုရလျှင် ပါလီမန်အခန်းကဏ္ဍ၊ အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှု၊ လက်နက်ကိုင်တပ်တည်ဆောက်မှု တို့မှာ သီးခြားနည်းဗျူဟာများဖြစ်သော်လည်း မဟာဗျူဟာမြောက် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းသို့ ဦးတည် ချီတက်နေခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ပြီးသော်တဖန် ထိုမှတစ်ဆင့် အောက်သို့ထပ်ဆင့်ခွဲစဉ်းစားလိုက်လျှင် မိမိတို့လူမျိုးတစ်မျိုးလုံး၏ လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ကျွန်တော်အပါအ၀င် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ အခန်းကဏ္ဍတို့မှာ ပိုမိုသေးငယ်သော လက်အောက်ခံ အကြောင်းအရာများသာလျှင် ဖြစ်ကြသည် ဟု ယူဆနိုင်လေသည်။
ကျွန်တော့်၏ ယခုအသက်မှာ (၄၄) နှစ် ဖြစ်သည့်အတွက် ကံကောင်းထောက်မစွာ ကျန်းမာအသက်ရှည်ပါက နောက်ထပ် အနှစ် (၂၀) ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဦးမည် ဟု မျှော်လင့်နိုင်၏။ မိမိအကောင်းဆုံး အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်မည့် အခန်းကဏ္ဍများတွင် မသေမီအချိန်အထိ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရန် စိတ်ကရည်သန် ထားပါ၏။ အမျိုးသား ရည်မှန်းချက်ဆီသို့ ကနေ့နက်ဖြန် ချက်ချင်းရောက်နိုင်မည် မရောက်နိုင်မည်ကိုကား တပ်အပ်သေချာ မပြောနိုင်ပါသော်ငြားလည်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနေအထား မိမိတို့ရည်မှန်းချက်နှင့် ပိုမိုနီးစပ်သော အနေအထား ကျန်ရစ်ခဲ့လျှင် သေရကျိုးနပ်သည် ဟု ဆိုနိုင်လေသည်။
တိုတောင်းသော လူ့ဘ၀ နှင့် ရေရှည်ဖြစ်သော တော်လှန်ရေး၏ ခရီးရှည်ကို တွေးတောဆင်ခြင်ရင်း၊ တော်လှန်ရေးတို့၏ သဘောသဘာဝကို မိမိနားလည်းနိုင်သလောက် ဖတ်ရှုဆည်းပူးဖူးသည်တို့ထဲမှ မျှဝေသင့်သည်တို့အား မျှဝေကြည့်ရန် စဉ်းစားကြည့်ရာ၊ ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ် ရေးသားခဲ့သော ခြေလေးချောင်းတော်လှန်ရေး စာအုပ်အား အခြေခံ၍ တော်လှန်ရေးတို့ လမ်းချော်တတ်ခြင်း အကြောင်းအရာ ကို ဆောင်းပါးပြု၍ ဤတွင်ရေးသားအပ်လေသည်။ ထိုစာအုပ်ကို ဖတ်ရှုလျက် ဖြစ်ပေါ်မိသော မေးခွန်းများကို စတင်ဆွေးနွေးလိုပါသည်။
ကနဦးမေးခွန်း။ ။ တော်လှန်ရေးတို့သည် မိမိတို့၏ မူရင်းရည်ရွယ်ချက်တို့မှ အဘယ်ကြောင့် ရံဖန်ရံခါ လမ်းချော်သွားကာ၊ အဟောင်းသော အာဏာရှင်များကို တော်လှန်သူများထဲမှ အချို့သည် အဘယ်ကြောင့် အသစ်သော အာဏာရှင်များ ဖြစ်လာတတ်ကြသနည်း။
ထိုမေးခွန်းနှစ်ခုကို ဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားရင်း ထပ်ဆင့်မေးခွန်းများ ပေါ်ပေါက်လာလေသည်။
ဒုတိယမေးခွန်း။ ။ လူသားတို့သည်ပင်လျှင် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် မကောင်းသည့်ဘက်သို့ ပျက်စီးသည့်ဘက်သို့ သွားလိုသည့် အလေးကဲသလော။ သို့တည်းမဟုတ် အာဏာသည်ပင်လျှင် လူသားတို့အား ပျက်စီးစေတတ်သလော။
တတိယမေးခွန်း။ ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့လည်ပတ်မှုအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့် အာဏာ နှင့် ထိုအာဏာအားဖြင့် အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းတို့အား မည်ကဲ့သို့ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မည်နည်း။
စတုတ္ထမေးခွန်း။ ။ နုနယ်သောတော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့အစည်း၏ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များကို ရည်မှန်းဆောက်ရွက်ရမည့်အစား မိမိတို့အစုအဖွဲ့အဖို့အာဏာစုစည်းမှု နှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တို့အား အစဉ်တစိုက်ဆောင်ရွက်နေမှုတို့ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ကြလေရာ၊ ယင်းတို့ကို မည်ကဲ့သို့ တွန်းလှန်ချေဖျက် ကြမည် နည်း။
ပဉ္စမမေးခွန်း။ ။ အကျင့်ပျက်ခြစားသူများအဖို့ သူတို့၏ခြစားမှုအကြောင်းကို လူမသိလေကောင်းလေ ဖြစ်သည့်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ သတင်းအမှောင်ချထားရန် ကြိုးစားတတ်ကြလေရာ (သို့တည်းမဟုတ် သတင်းမှားဖြန့်ချိမှုအားဖြင့် မကောင်းမှုတို့အား ကာကွယ်လုပ်ဆောင်တတ်ကြလေရာ)၊ ကျန်းမာစွာလည်ပတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်စေရေးအတွက် ဝေဖန်ရေး နှင့် မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်ရေး တို့အား မည်သည့် အတိုင်းအတာအထိ ကျင့်သုံးရမည်နည်း။ (ယခင် လက်ဝဲ၀ါဒီတို့က “ဝေဖန်ရေး နှင့် မိမိကိုယ်ကို ဝေဖန်ရေး” ဟု သုံးနှုန်းတတ်ကြပြီး ခေတ်ပေါ်စကားအရ ဆိုလျှင် ပြန်လှန်သုံးသပ်ခြင်း (review) ပင် ဖြစ်လေသည်)။
ဆဋ္ဌမမေးခွန်း။ ။ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အားပြိုင်မှုများတွင် ခြစားသည့်အုပ်စုသည် ခြမစားသူပြိုင်ဘက်များအား တည်ရှိနေသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများအဖြစ်ရှုမြင်သည့်အတွက် ခြမစားသူပြိုင်ဘက်များအား ချေမှုန်းသုတ်သင်ရာ၌ သစ္စာဖောက်များ၊ သတင်းပေးများ၊ တစ်ဖက်သူလျှိုများ စသည်ဖြင့် တံဆိပ်ကပ်ကာ စွပ်စွဲသုတ်သင်တတ်လေရာ၊ ထိုအဖြစ်ဆိုးများ မဖြစ်ရလေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းကြ မည်နည်း။
သတ္တမမေးခွန်း။ ။ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း အထက်ဖော်ပြပါ အပြစ်အနာအဆာများ ကြီးထွားရင့်မာလာကာအဖွဲ့အစည်းအား လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်သွားသည့်အခြေအနေသို့ ရောက်မသွားစေဖို့ ထိမ်းသိန်းစောင့်ရှောက်ကြရန် မည်သူတို့မှာ တာဝန်ရှိသနည်း။
အထက်ဖော်ပြပါမေးခွန်း ခုနစ်ခုတို့အနက် ကနဦးပင်မ ပထမ မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယူဂိုဆလပ်ကွန်မြူနစ် ခေါင်းဆောင်ဟောင်းနှင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ဝေဖန်သူ အတိုက်အခံ (ကွယ်လွန်သူ) မီလိုဗန် ဒဂျီးလတ်စ် က “လူတန်းစားသစ် (The New Class: An Analysis of the Communist System)” အမည်ရ သူ၏စာအုပ်တွင် သုံးသပ်ရေးသားဖူးသည်။ ဖိနှိပ်သူလူတန်းစားအဟောင်းအားတော်လှန်ခဲ့သည်ဆိုပါမှ၊ တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးသည့်အချိန်တွင် အာဏာရ ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်များသည် တိုင်းပြည်ကို အာဏာရှင်ဆန်ဆန်အုပ်ချုပ်သည့် အခွင့်ထူးခံ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားသစ် တစ်ရပ် ဖြစ်လာကြောင်းကို ရေးသားထားသည်။ ပညာရပ်ဆန်သည့် ထိုစာအုပ်အကြောင်းကိုတော့ အကျယ်မပြောတော့ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါမေးခွန်း ခုနစ်ခုစလုံးအား တွေးတောသုံးသပ်စရာ ခေါင်းစဉ်များအဖြစ် ပေါ်ထွန်းစေသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဂျော့ခ်ျ အော်ဝဲလ် (George Orwell) ၏ Animal Farm စာအုပ် ဖြစ်သည်။
ဂျော့(ခ်ျ)အော်ဝဲလ် ရေးသားသော Animal Farm အမည်ရ ၀တ္တုလတ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာပေတွင် ဂန္တ၀င် တန်းဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်တန်ဖိုးထားခြင်းခံရသည့် နိုင်ငံရေးသရော်စာဆန်ဆန် ပုံနှိုင်းဝတ္တု ဖြစ်လေသည်။ ဟိုးယခင်ကာလတုန်းက ထိုဝတ္တုလတ်အား သခင်ဘသောင်းက “ခြေလေးချောင်း တော်လှန်ရေး” အမည်ဖြင့် ဘာသာပြန်လျက် ဘာသာပြန်စာပေအသင်းက ထုတ်ဝေဖူးလေသည်။ ထိုစာအုပ်မှာ အိမ်က မိဘတို့၏ စာအုပ်စင်တွင် ရှိသဖြင့် ငယ်စဉ် ငါးတန်း ခြောက်တန်းကျောင်းသား အရွယ်ကတည်းက မိမိ ဖတ်ဖူးလေသည်။
အဆိုပါ ခြေလေးချောင်းတော်လှန်ရေး ၀တ္တုက တင်ပြထားသည်မှာ – ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတို့ဖြင့် တော်လှန်ခဲ့ကြသော်လည်း မသမာသူ နိုင်ငံရေးသမားများက တော်လှန်ရေးအတွင်း မသိမသာ အခွင့်အရေးယူရင်း အာဏာရှင်စနစ်ကို တည်ဆောက်ကြသဖြင့် မိမိတို့အားလုံးမှာ အာဏာရှင်လက်သစ်လက်အောက်သို့ ကျရောက်သွားရသည့် ဖြစ်အင်အား တိရိစ္ဆာန်ဇာတ်ကောင်များဖြင့် ဇာတ်ကွက်ဖော်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဆိုဗီယက်နိုင်ငံတွင် စတာလင် တစ်ယောက် အာဏာရှင် ဖြစ်လာပုံသည် ဤ၀တ္တုက ကျောရိုးယူထားသည့် နောက်ခံ အကြောင်းအရာ ဖြစ်သည်။
ခြေလေးချောင်းတော်လှန်ရေး စာအုပ်ပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကား ဤသို့ ဖြစ်လေသည်။
လယ်သမား ဦးသာခေါင် (Mr. Jones) ပိုင်ဆိုင်သည့် ယင်းမာပင်ကွင်း (Manor Farm) တွင် နွား၊ ကြက်၊ ၀က်၊ မြည်း၊ မြင်း၊ ဆိတ်၊ ဘဲ၊ ခွေး စသည့် တိရိစ္ဆာန်မျိုးစုံ ရှိကြလေသည်။ ပေါ့လျော့တတ်လျက် ၀ီရိယအားနည်းသည့် ဦးသာခေါင်တစ်ယောက် ထန်းရည်မူးပြီး အိပ်နေသည့် တစ်ညသော ကာလတွင် ကွင်းအတွင်းရှိ တိရိစ္ဆာန်ပေါင်းစုံတို့သည် “ဗိုလ်ကြီး” အမည်ရ ၀က်အိုကြီး ထံသွားရောက်ပြီးလျှင် တော်လှန်ရေးတရား နာကြားကြသည်။
ယင်းမာပင်ကွင်းအပါအ၀င် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၏ သာယာဝပြောမှုမှန်သမျှသည် တိရိစ္တာန်တို့၏လုပ်အားဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပိုင်ရှင်လူသားတို့မှာ တိရိစ္ဆာန်တို့အား မတရား ဂုတ်သွေးစုပ်လျက် ချမ်းသားကြွယ်ဝနေကြလျက် လုပ်အားရှင် တိရိစ္ဆာန်တို့မှာ မသေရုံတမယ် နိမ့်ကျသော အခြေအနေတို့ဖြင့် ရှင်သန်/သေဆုံး နေကြရကြောင်း၊ လူသားတို့ကို သုတ်သင်နိုင်မှသာလျှင် သာယာသော တိရိစ္ဆာန်ဘောင်ကြီးကို ထူထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း မြွက်ကြားသည်။ လူသားများကိုတော်လှန်သည့်အခါတွင်လည်း လူသားများလို မကျင့်ကြံကြဖို့၊ တိရိစ္တာန်အချင်းချင်း နိုင်ထက်စီးနင်းမလုပ်ကြဖို့ အစရှိသော ကျင့်ဝတ်များကို လမ်းညွှန်သည်။ “ဒို့ တိရိစ္ဆာန် သီချင်း (The Beasts of England)” ကို တိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့အား သင်ကြားပေးသည်။
အဆိုပါ ဗိုလ်ကြီး (Major) အမည်ရ ၀က်ကြီးမှာ ကွယ်လွန်ပြီးနောက် လပိုင်းကာလများတွင် ဗန္ဓုလ (Napoleon) နှင့် ဘော်ဖြူ (Snowball) ဟူသည့် ၀က်ထီးနှစ်ကောင်က တိရိစ္ဆာန်များအား တော်လှန်ရေးတရားများကို လျှို့ဝှက်လက်ဆင့်ကမ်း သင်ကြားပေးသည်။ တစ်ရက်တွင် တိရိစ္ဆာန်များသည် ဦးသာခေါင်နှင့် အပေါင်းအပါ လူသားများအား တော်လှန်ပြီး ယင်းမာပင်ကွင်းကို သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ ယင်းမာပင်ကွင်းအားလည်း “တိရိစ္ဆာန်ကွင်း (Animal Farm)” ဟု အမည်ပြောင်းလဲလိုက်ကြသည်။ ကျီထရံတွင် တိရိစ္ဆာန်ဝါဒ၏ အခြေခံအချက်ကြီး ခုနစ်ရပ်ကို အက္ခရာတင်ကြသည်။ “တိရိစ္ဆာန်များအားလုံး တစ်တန်းတစားတည်း ဖြစ်သည် (All animals are equal.)” ဆိုသည့်အချက်မှာ အရေးအကြီးဆုံးအချက် အနေဖြင့် ပါဝင်သည်။
ဘော်ဖြူ က တိရိစ္ဆာန်များအား စာရေးစာဖတ်နိုင်ရန် သင်ကြားပေးသည်။ ဗန္ဓုလ ကမူ နွားမကြီးများထံမှ ရသော နို့များကို ကဲ့ယူထားပြီး၊ ခွေးပေါက်ကလေးကိုးကောင်ကို လျို့ဝှက်တစ်နေရာ၌ ၄င်း၏ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင် သီးခြားထားကာ အဆိုပါ နွားနို့များဖြင့် ကျွေးမွေး မွေးမြူထားသည်။ ၀က်များမှာ ကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ဟု အကြောင်းပြလျက် အစားကောင်းအသောက်ကောင်းများ ရယူကြသည်။ ၀က်တို့မှာ နို့ နှင့် သရက်သီးမှည့်များကို ကျန်းမာရေးအတွက် စားသုံးကြရန်လိုအပ်သည် ဟု သံကြောင် (Squealer) အမည်ရ ၀က်ထီးတစ်ကောင်အား တိရိစ္ဆာန်များထံ စေလွှတ်၍ လှည့်လည်ရှင်းပြစေသည်။ ဦးသာခေါင်အိမ်ပေါ်ရှိ အခန်းတစ်ခန်းကို ဌာနချုပ်ပြုလုပ်လျက် ယင်းအခန်းမှနေ၍ ၀က်များက စီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်သည်။
ကာလအတန်ကြာသော် တိရိစ္ဆာန်ကွင်းအား လူသားများလာရောက်တိုက်ခိုက်ကြသည်။ အနီးအနားဝန်းကျင်မှ လယ်ပိုင်ရှင်များသည်လည်း တိရိစ္ဆာန်တော်လှန်ရေး ကူးစက်လာမည်ကိုစိုးရိမ်သဖြင့် ဦးသာခေါင်နှင့် ပူးပေါင်းကာ တိုက်ခိုက်ပေးကြသည်။ နွားတင်းကုတ် အနီးမှ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကို ဘော်ဖြူ ခေါင်းဆောင်ကာ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ခုခံတိုက်ခိုက်ကာ တွန်းလှန်လိုက်ကြသည်။ ဘော်ဖြူအား တိရိစ္ဆာန်များ၏ ချစ်ခင်လေးစားမှု မြင့်မားလာသည်။ အဆိုပါ နွားတင်းကုတ်တိုက်ပွဲ (The Battle of Cowshed)၏ အောင်မြင်မှုကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သေနတ်ပစ်ဖောက် ပွဲကျင်းပ၍ အောင်ပွဲခံကြသည်။
ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် ဗန္ဓုလ နှင့် ဘော်ဖြူတို့၏ အားပြိုင်မှုမှာ မြင်သာလာသည်။ မီးစက် တည်ဆောက်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ကွင်းအား ခေတ်မီသာယာဝပြောစေမည့် အစီအမံအား အစည်းအဝေးတွင် ချက်ကျလက်ကျ ဘော်ဖြူကတင်ပြသည်။ ဗန္ဓုလက မလုပ်သင့်ဟုသာ ပြောသည်၊ ပရိတ်သတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိ။ သို့ရာတွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ ဗန္ဓုလက လက်ခေါက်မှုတ်လိုက်ရာ ခွေးကြီးကိုးကောင် ၀င်လာပြီး ဘော်ဖြူအား ထိုးဟပ်တိုက်ခိုက်သဖြင့် ဘော်ဖြူ ထွက်ပြေးသွားရသည်။
ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် ကွင်း၏စီမံအုပ်ချုပ်မှုများကို အစည်းအဝေးဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ ဗန္ဓုလ ခေါင်းဆောင်သည့် ၀က်ကော်မီတီကသာ ဆုံးဖြတ်မည် ဟု ဗန္ဓုလက မိန့်ခွန်းချွေသည်။ ထိုသည်ကို ၀က်လေးကောင်က ကန့်ကွက်သေးသော်လည်း ခွေးကြီးများက ထကာ မန်ဖီဟိန်းဟောက်သဖြင့် အားလုံးငြိမ်နေလိုက်ရသည်။ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗန္ဓုလ မှာ တိရိစ္ဆာန်များအား ကိုယ်တိုင် စကားထွက်မပြောတော့ပဲ ၀က် သံကြောင် မှတဆင့်သာ ကြော်ငြာချက်များ အမိန့်များ ထုတ်ပြန်သည်။
မီးစက်တည်ဆောက်ရေးကို လုပ်ဆောင်မည်ဟု သံကြောင်က တဆင့် ဗန္ဓုလက ကြေငြာသည်။ မီးစက်တည်ဆောက်ရေးမှာ ဘော်ဖြူ၏ အကြံမဟုတ်ကြောင်း၊ ဗန္ဓုလက စတင်ကြံစည်အားထုတ်ခဲ့သော အမှုသာလျှင် ဖြစ်ကြောင်း သံကြောင်က တိရိစ္ဆာန်များအား ရှင်းပြသည်။ မီးစက်လည်ပတ်လာသည့်အခါ ဘ၀သာယာလာမည့်အကြောင်း ကတိများ အပြောများကို မျှော်မှန်းရမ်းရော်လျက်၊ အစာလျှော့စားကာ အလုပ်ပိုလုပ်၍ မီးစက်တည်ဆောက်ရေးအတွက် တိရိစ္ဆာန်များ အားထုတ်ကြရသည်။
တစ်ရက်နေ့တွင် မုန်တိုင်းတိုက်လေရာ မခိုင်ခန့်သော မီးစက်အဆောက်အအုံမှာ ပြားပြားဝပ် ပြိုကျသည်။ မီးစက်ပြိုပျက်ရခြင်းမှာ ဘော်ဖြူ၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ဗန္ဓုလနှင့် သံကြောင်က တိရိစ္ဆာန်များအား အယုံသွင်းသည်။ ဘော်ဖြူကို လူဆိုးဖြစ်အောင် ပုံဖော်သည်သာမက ဘော်ဖြူနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည် ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အခြားတိရိစ္ဆာန်များစွာကို စွဲချက်တင် သတ်ဖြတ်သည်။ (ဆဋ္ဌမမြောက် အခြေခံတရား ဖြစ်သည့် “တိရိစ္ဆာန်အချင်းချင်း မသတ်ဖြတ်ရ” ဆိုသည့်အချက်ကို ကျီနံရံတွင် ညအချိန်၌ နွားမ ခွာဖြူ နှင့် လား မဟော် တို့ သွားဖတ်ကြည့်ကြရာ၊ “အကြောင်းမဲ့” ဆိုသော စကားရပ်အားထည့်သွင်းလျက် “တိရိစ္ဆာန်အချင်းချင်း အကြောင်းမဲ့ မသတ်ဖြတ်ရ” ဟု ပြင်ရေးထားပြီးဖြစ်သည်ကို တွေ့ရလေသည်။)
ဒို့တိရိစ္ဆာန်သီချင်းကို မသီဆိုရ ဟု တားမြစ်သည်။ ယင်းအစား ဗန္ဓုလ ၏ ဘုန်းတော်ဘွဲ့သီချင်းများကို သီဆိုစေသည်။ ဗန္ဓုလ ကိုယ်တိုင်မှာမူ လူတစ်ယောက်ပမာ ဇိမ်ကျကျ နေထိုင် စည်းစိမ်ခံသည်။ နွားတင်းကုတ်တိုက်ပွဲတွင် ဘော်ဖြူ “တိရိစ္ဆာန်ဇာနည် ပထမတန်းဘွဲ့” ရခဲ့သည်ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ဘဲ သူရဲဘောကြောင်သောကြောင့် ရှုတ်ချခြင်းခံခဲ့ရသည် ဟု တိရိစ္ဆာန်များကို အယုံသွင်းသည်။
အနီးအနားမှ လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးအောင်ပန်းနှင့် အဖွဲ့သည် တိရိစ္ဆာန်များဆောက်နေသည့် ဓါတ်မီးစက်ကို ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့် လာရောက်ဖောက်ခွဲဖြစ်လိုက်ကြသည်။ ထိုသူတို့အား မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့သော်လည်း မိမိတို့ တိရိစ္ဆာန်များစွာ ဒဏ်ရာရကျန်ခဲ့ကြရာ၊ ဒဏ်ရာရသူများထဲတွင် အဓိက တိရိစ္ဆာန်လုပ်အားရှင် နွားကြီး “ဂျိုကား” (မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာမူတွင် မြင်းကြီး Boxer) လည်း အပါအ၀င် ဖြစ်သည်။
ဒဏ်ရာပင်ရသော်ငြားလည်း နွားကြီး ဂျိုကားမှာ ၄င်း၏ ဆောင်ပုဒ် နှစ်ခုဖြစ်သည့် “ငါ အလုပ်ကို ပိုကြိုးစားလုပ်မယ်” နှင့် “ဗန္ဓုလ အမြဲမှန်သည်” ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ်နှစ်ရပ်ကို ပါးစပ်ကမချပြောရင်း အလုပ်ကို ကြိုးစားသထက်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လေရာ၊ ဘုန်းဘုန်းလဲသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်သွားလေသည်။ ထိုအခါ ဗန္ဓုလ၏ အမိန့်ဖြင့် ရွာသစ်ကြီးဆေးရုံသို့ ပို့ရန် စီစဉ်ကြလေသည်။ ဆေးရုံသို့ပို့မည့်ကားပေါ်သို့ ဂျိုကားကို တက်စေပြီးနောက် ကားကို စမောင်းထွက်သွားသည့်အခါကျမှ စာကောင်းစွာဖတ်တတ်သည့် လား မဟော် က ကားနံဘေး စာများကို ဖတ်ကြည့်ရာ၊ “ရွာသစ်ကြီး သားသတ်ကုမ္ပဏီ၊ သားရေနှင့် အမဲရိုးရောင်းသူများ” ဟု ဖြစ်နေသဖြင့် တိရိစ္ဆာန်များအား ဖတ်ပြသည်။ မဟော် နှင့် တိရိစ္ဆာန်များက ဂျိုကားရေ နင့်ကို သတ်တော့မယ် ခုန်ချ ချန်ချ ဟု အော်ဟစ်သဖြင့် ဂျိုကားက တ၀ုန်းဝုန်းကန်ကျောက်ကာ ဆင်းပြေးနိုင်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း အားမတန်ဘဲ လိုက်ပါသွားရသည်။
ပိုင်ရှင်ဟောင်း ဦးသာခေါင်နေသည့် အိမ်တွင် ၀က်များတက်နေကြနေသည်မှာ ကြာခဲ့ပြီ။ ယခုနာမည် “တိရိစ္ဆာန်ကွင်း” အား တော်လှန်းမတိုင်မီ ယခင်မူလနာမည် “ယင်းမာပင်ကွင်း” အဖြစ်သို့ ပြန်လည် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်သည်။ ဓါတ်မီးစက် တစ်လုံးမက တည်ဆောက်ပြီး ကွင်း၏ ၀င်ငွေလည်းတိုးတက်လာသော်လည်း ၀က်များ နှင့် ခွေးများမှလွဲ၍ ကျန်တိရိစ္ဆာန်များမှာ ပင်းပန်းကြီးစွာ အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ ၀က်များနှင့် ခွေးများမှာ ဆူဖြိုးသထက် ဆူဖြိုးလာကြသည်။ “ခြေလေးချောင်းကောင်းတယ်။ ခြေနှစ်ချောင်းမကောင်းဘူး” ဆိုသော ဆောင်ပုဒ် အစား “ခြေလေးချောင်းကောင်းတယ်။ ခြေနှစ်ချောင်းက ပိုကောင်းတယ်” ဟူသောဆောင်ပုဒ်ကို ဆိုကြရသည်။ ၀က်တို့သည် ခြေနှစ်ချောင်းထောက်၍ လမ်းလျှောက်ကြပြီး လူအ၀တ်အစားဝတ်ကာ ကွင်းထဲတွင် သွားလာကြသည်။ ၀က်ခေါင်းဆောင်များသည် နံဘေးကွင်းများမှ လယ်သမားများ နှင့် ရောင်းဝယ်ဖေါက်ကားကြသည်။ ဦးသာခေါင်နေခဲ့သည့်အိမ်ပေါ်တွင် ၀က်များနှင့် လူများ ပါတီပွဲချကာ အရက်သောက်ဖဲရိုက်ကြသည်။ ထိုဖြစ်အင်များကို ကျန်တိရိစ္ဆာန်များက ငေးမော၍ သာ ကြည့်နေကြရတော့သည်။
ပိုင်ရှင်ဟောင်း ဦးသာခေါင်လက်ထက်က ပိုမိုပင်ပန်းချို့တဲ့သလား၊ ၀က်များအုပ်ချုပ်သည့် ဤကာလတွင်မှ ပိုမို ပင်ပန်းချို့တဲ့သလား ဆိုသည်ကို မှတ်ဥာဏ်ကောင်း၊ စာဖတ်တတ်၊ ဥာဏ်ပညာရှိသည့် လား တိရိစ္ဆာန် မဟော် (မူရင်း အင်္ဂလိပ်မူတွင် မြည်း တိရိစ္ဆာန် Benjamin) ကလွဲ၍ မည်သည့် တိရိစ္ဆာန်ကမှ မမှတ်မိကြတော့ချေ။
ဖြတ်သန်းခဲ့သည့်နှစ်ကာလများအတွင်း အခြေခံမူကြီး ခုနစ်ချက်ကိုလည်း တိရိစ္ဆာန်များအိပ်ကြသည့် ညအချိန်ကျမှ ၀က် သံကြောင်က လှေကား နှင့် ဆေးဗူး ယူပြီး၊ ကျီနံရံပေါ်တွင် ဟိုခါ ပြင်ရေးလိုက် သည်ခါ ဖျက်ရေးလိုက်နှင့်ပင် အခြေခံမူအချက် ခုနှစ်ချက်အနက် အချက်နံပါတ်(၇) တစ်ချက်တည်းသာ ကျန်တော့သည်။ တိုတစ်ချက်ကို ပင်လျှင်လည်း ပြန်ပြင် ရေးသားထားကြောင်းတွေ့ရလေသည်။
နွာမအိုကြီး ခွာဖြူ သည် အခြေခံမူကြီး ခုနစ်ချက်အား ရှေ့ဖြစ်ဟောင်းအောက်မေ့ဖွယ် ပြန်ဖတ်ချင်သဖြင့် စာဖတ်တတ်သော လား မဟော်ကို အတူခေါ်သွား၍ ဖတ်ပြခိုင်းရာ မဟော် မှာ စိတ်မချမ်းမြေ့စွာဖြင့် ဖတ်ပြရလေသည်။ ခုနစ်ချက်ထဲမှာ တစ်ချက်တည်းကျန်တော့သည်။ ယခင် မူရင်း အခြေခံမူအချက်နံပါတ်(၇) မှာ “တိရိစ္ဆာန်များအားလုံး တစ်တန်းတစားတည်း ဖြစ်သည် (All animals are equal.)” ဟု ဖြစ်သော်လည်း၊ ယခုကျန်တော့သည့် ထိုအချက်နံပါတ် (၇) တစ်ချက်တည်းကိုပင်လျှင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲ ရေးသားထားလေသည်။
“အားလုံးသော တိရိစ္ဆာန်တို့မှာ တန်းတူ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အချို့တိရိစ္ဆာန်တို့မှာ ပို၍တန်းတူ ဖြစ်ပြီးလျှင်၊ အချို့တိရိစ္ဆာန်တို့မှာ လျော့၍ တန်းတူ ဖြစ်သည်။ (All animals are equal but some animals are more equal than others.)”
(၄) နွားနို့ပျောက်သည့်ကိစ္စ နှင့် ခွေးကိုးကောင်
“ခြေလေးချောင်းတော်လှန်ရေး” အမည်ဖြင့် သခင်ဘသောင်းဘာသာပြန်သည့်စာအုပ်တွင် နွားနို့ကိစ္စအား ဗန္ဓုလ က ထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်သွားပုံကို အောက်ပါအတိုင်းရေးသား တင်ပြထားသည်။
“ထိုအခိုက်တွင် နို့ညှစ်နွားမကြီး သုံးကောင်မှာ မအီမသာဖြစ်နေ၍ ပြင်းထန်စွာ အော်လျက်ရှိကြသည်။ ဦးသာခေါင် ရှိစဉ်က မနက်တိုင်း နို့ညှစ်သော်လည်း ဦးသာခေါင်ကို တော်လှန်လိုက်ပြီးနောက် လွတ်လပ်ခြင်းရ၍ ဘယ်သူမှ နို့ညှစ်မည့်သူ မရှိသဖြင့် နို့တွေတောင့်ပြီး နို့အုံကြီးတွေ ကွဲမတတ်ဖြစ်ကာ မချိမဆန့် ဖြစ်နေကြသည်။ ခဏတာမျှတွေ၍ ဖြစ်နေကြပြီးလျှင် ၀က်များက အကြံရ၍ နို့ပုံးများကို ယူစေပြီးနောက် ခွာကြားနှင့် ညှပ်၍ နို့ညှစ်ကြရာ အတော်ကလေး ဟန်သည်။ မကြာမီ ပုံးငါးပုံးနှင့် အပြည့်ရ၍ အားလုံးသော တိရိစ္ဆာန်တို့ သွားရည်တများများ ဖြစ်နေကြသည်။
“ဒီနို့တွေ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ဦးသာခေါင်ရှိတုန်းကတော့ တစ်ခါတလေ ဒို့စားတဲ့ အစာထဲထည့်ကျွေးတယ်” ဟု တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကပြောသည်။ ထိုအခါ ဗန္ဓုလက နို့ပုံးများရှေ့တွင် ရပ်၍ “ရဲဘော်တို့၊ ဒီနို့အတွက်ဟာ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ ငါကြည့်ပြီး စီမံပါ့မယ်။ စပါးရိတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ရဲဘော် ဘော်ဖြူနောက်ကို လိုက်ကြပါ။ ငါ အခုပဲ လိုက်လာခဲ့ပါ့မယ်။ ကိုင်း . . . သွားကြပေတော့။ အရိတ်နောက်သွားကျရင် စပါးတွေ ပျက်ကုန်မယ်” ဟု ဆိုသည်။
အားလုံးသော တိရိစ္ဆာန်တို့လည်း ဗန္ဓုလပြောသည့်အတိုင်း ဘော်ဖြူကို ခေါင်းဆောင်ပြု၍ စပါးရိတ်သွား ကြ သည်။ ညနေ စပါးရိတ်ပြီး ပြန်လာကြသောအခါ နို့ပုံးများကို မတွေ့ကြရတော့။”
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း နေ့စဉ်ထွက်ရှိနေသည့် နွားနို့ကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်လိုက်မှုသည် ဗန္ဓုလ၏ အာဏာရှင်စနစ် တည်ဆောက်မှုတွင် ကနဦးဆုံးအဆင့် ဖြစ်လေသည်။ ထိုနွားနို့တို့ကို ဗန္ဓုလသည် မိမိကိုယ်တိုင် စားသုံးသည့်အပြင် မိမိကိုသစ္စာခံအောင် ခွေးပေါက်ကလေးများအား ကျွေးမွေးပျိုးထောင်ရာ၌ ထိုနွားနို့များကို အသုံးချခဲ့လေသည်။ လများအကြာတွင် ထိုခွေးပေါက်ကလေးကိုးကောင်မှာ ဆူဖြိုးလာလျက် ခွေးကြီးကိုးကောင် ဖြစ်လာသည်။ တိရိစ္ဆာန်ကွင်း၏ ကောင်းရာကောင်းကျိုး ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်သော်လည်း ခေါင်းဆောင်မှုတွင် မိမိနှင့်ပြိုင်ဘက်ပမာဖြစ်နေသူ ဘော်ဖြူအား မောင်းထုတ်ရန်နှင့် အခြားတိရိစ္ဆာန်များအပေါ် အကြောက်တရားဖြင့် လွှမ်းမိုးထားနိုင်အောင် ဗန္ဓုလက ခွေးကိုးကောင်ကို အသုံးချလျက် ချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
အပေါ်က ပုံပမာထဲက နွားနို့ဆိုသည်ကား အခွင့်အရေးအကျိုးစီးပွားတို့အား အလင်္ကာပြု ဆိုလိုရင်းဖြစ်လေသည်။ ယခုခေတ်တွင် နားလည်လွယ်အောင်ပြောရလျှင် အသင်းအဖွဲ့ပိုင် ဘဏ္ဍာငွေများကို ကိုင်တွယ်စီမံပိုင်ခွင့် လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် လမ်းအဆောက်အအုံစသည့် ပြည်သူ့လုပ်ငန်း ဆောက်လုပ်ခွင့် ကန်ထရိုက်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေး ကားပါမစ်များလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လေသည်။ အချို့ခေါင်းဆောင်များသည် ထိုအခွင့်အရေး (incentive) များအား တပည့်ငယ်သားအဖြစ်ခံယူသူများကို ထပ်ဆင့်ချပေးခြင်းအားဖြင့် အိမ်ကြီးထဲတွင် အိမ်ငယ်ဆောက်ကာ မိမိအုပ်စုတည်း ဟူသော အင်အားစုကို တည်ဆောက်တတ်ကြလေသည်။
တစ်ခါတစ်ခါ ပြောတတ်ကြလေသည်။ နွားနို့ တစ်ဗူးနှစ်ဗူး ပျောက်တာ ဘာမှ ရေးကြီးခွင်ကျယ်ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး ဟု ဆိုတတ်ကြလေသည်။ နွားနို့ပျောက်သည့်ကိစ္စမှာ ပမာဏအားဖြင့် သေးငယ်လျှင် အရေးမကြီး ဟု ဆိုကောင်းဆိုလို့ ရနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုနွားနို့များအား အသုံးချလျက် အဖွဲ့အစည်း ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းအား (တနည်း၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လူပုဂ္ဂိုလ်ဗဟိုပြုအာဏာရှင်စနစ်အား) မည်ကဲ့သို့ ဦးတည် တည်ဆောက်နေသနည်း ဆိုသည့်အချက်က ပိုမို အရေးကြီးလေသည်။ ကိစ္စကို ငယ်နုစဉ်က ကိုင်တွယ်သော် နိုင်နင်းနိုင်သော်လည်း၊ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ဟုလွှတ်ထားကာ ရောဂါရင့်သောအခါကျမှ ကိုင်တွယ်လျှင် မနိုင်နင်း မတားဆီးနိုင်တော့ပေ။
ခွေးကိုးကောင် မှာ စတာလင်၏ လျှို့ဝှက်ပုလိပ်အဖွဲ့ကို အလင်္ကာပြုထင်ဟပ်ပြလေသည်။ ထို့အပြင် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကာလ မော်စီတုန်း အသုံးချခဲ့သော တပ်နီလူငယ်များကို မြင်ယောင်ကြည့် နိုင်လေသည်။ သို့တည်းမဟုတ် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးတစ်ယောက် ပါတီတစ်သင်းတစ်ဖွဲ့ကို မှားမှားမှန်မှန် ထောက်ခံလျက် တစ်ဖက်သားများကို အပုတ်ချတိုက်ခိုက်တတ်သည့် ခေတ်သစ် လော်ဘီ အချို့သည် ပင်လည်း ဤအမျိုးအစား၏ လက္ခဏာပါရှိနေသည် ဟု ဆိုနိုင်လေသည်။
လက်ဝဲဆန်သည့် ခေါင်းဆောင်အချို့က ၄င်းတို့၏ငယ်သားများအားသင်ကြားတတ်သည့် အယူအဆတစ်ခုမှာ – ပြိုင်ဘက် (သို့မဟုတ်၊ သဘောထားချင်း မတူသူ) များအား ပုတ်ခတ်ခြင်း တိုက်ခိုက်ခြင်း ခြိမ်းခြောက်ခြင်း သည်ပင်လျှင် တော်လှန်ရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည် ဟု သင်ကြားတတ်ကြ လေသည်။
တော်လှန်ရေးအတွက် သစ္စာရှိရှိ လုပ်ဆောင်နေသူများအား တော်လှန်ရေးကို သစ္စာဖောက်နေသူများက သစ္စာဖောက် ဟု စွပ်စွဲကာ သုတ်သင်ကြသည့် ဖြစ်စဉ်များသည် သမိုင်း၏ ဟိုအကွေ့ သည်အကွေ့များတွင် ရှိတတ်လေသည်။
၁၉၈၈ လူထုအရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်း စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်သဖြင့် မိမိထက် အသက် သုံးလေးငါးနှစ် ကြီးသည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ရာပေါင်းများစွာတို့ နယ်စပ်ဒေသများသို့ တိမ်းရှောင် ထွက်ပြေးခဲ့ကြရာမှ စုစည်းပေါ်ပေါက်လာသည့် ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော် အတွင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဖြုတ်ထုတ်သတ် ဖြစ်ရပ်ကြီးမှာ ယနေ့ထက်တိုင် သွေးစက်များမခြောက်သေး ဟု ဆိုနိုင်လေသည်။
၁၉၉၂-ခုနှစ်ခန့်တွင် တရုတ်နယ်စပ် ကချင်ဒေသတွင်းတစ်နေရာ ပါဂျောင်ဒေသအခြေစိုက် ABSDF ကျောင်းသားတပ် အဖွဲ့ခွဲအတွင်း အဖွဲ့တွင်းအားပြိုင်ကြရာမှ လူများပြီးအုပ်စီးနိုင်သည့်အဖွဲ့က ကျန်အနည်းစုအား သစ္စာဖောက် ဟု စွပ်စွဲ နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်ကို ကနဦးတွင် ဖုံးဖိထားကြရာမှ နောင်တွင် ဟိုးလေးတကြော် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
စုစုပေါင်းမှ ၃၅၀-၄၀၀ ခန့်ရှိသည့် ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့အတွင်း သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ဖြစ်သည့် ကျောင်းသားရဲဘော် (၁၀၇) ဦးအား စစ်ထောက်လှမ်းရေးများဖြစ်ကြသည် ဟု စွပ်စွဲကာ လူမဆန်သော နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် နှိပ်စက်ခဲ့ကြသည်။ အကျဉ်းချ နှိပ်စက်ခံရသူများထဲမှ (၃၆) ဦးမှာ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသည်၊ သို့မဟုတ် နှိပ်စက်မှုဒဏ် ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ကြရသည်။ ကျောင်းသူ ရဲမေ တစ်ဦးအားနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပုံမှာ စာတင်၍ မရေးချင်လောက်အောင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့ကြသည်။
အလားတူ နောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ အီဆာ အကြီး ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်သည်နှင့် အစ္စရေးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့၏ ပထမဆုံး အကြီးအကဲအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် အီဆာ အကြီး (Big Isser သို့မဟုတ် Isser Be’eri) မှာ ပြိုင်ဘက်များနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာရှိသူများကို သစ္စာဖောက် သတင်းပေး ဟုစွပ်စွဲကာ လုပ်ကြံခြင်း ကွပ်မျက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ အပြစ်မရှိသည့် အစ္စရေးစစ်ဗိုလ် ကပ္ပတိန် Tubiansky အား အာရပ်သတင်းပေး ဟု စွပ်စွဲပြီး တစ်နာရီမျှ အကျဉ်းရုံးစစ်ဆေးကာ (အပြစ်မရှိ ဟု သူကိုယ်တိုင် သိရက်သားနှင့်) သေဒဏ်ချ ပစ်သတ်ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ အာရပ်ဖက်မှသတင်းများကို မိမိတို့ဘက်သို့ပေးနေသူ သတင်းပေး Ali Kassem အား အလုပ်သဘောအရ မည်သည့်မှားယွင်းမှု မည်သည့်ပြစ်ချက်မှမရှိဘဲ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခိုင်းခဲ့သည်။ နောက် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အကြာတွင် ၀န်ကြီးချုပ် ဘင်ဂူရီယံ၏ မိတ်ဆွေ မာပိုင်းပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Abba Hushi ကိုပင် သက်သေများ အခိုင်အမာပြလျက် ဗြိတိသျှ သူလျှို ဟုစွပ်စွဲသည်။ သူကိုယ်တိုင် ခိုင်းစေပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့သည့် သံကြိုးစာအတုကို သက်သေအဖြစ် တင်ပြသည်။ စွပ်စွဲခံရသူ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို ရက်ပေါင်း ခုနစ်ဆယ်ကျော်မျှ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီး ထိုခေါင်းဆောင်မှာ ဗြိတိသျှသူလျှို ဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုစေခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း တွေရှိချက်များအရ၊ ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ် ထောက်လှမ်းရေး KGB နည်းလမ်းများဖြစ်သည့် ထောင်ချောက်ဆင်စွပ်စွဲခြင်း၊ အတုပြုလုပ်စွပ်စွဲခြင်း၊ နှိပ်စက်မေးမြန်းခြင်း တို့အားကျင့်သုံးကာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသြဇာ အား ချဲ့ထွင်တည်ဆောက် သည့် အီဆာ အကြီး အား စစ်ခုံရုံးတင် အပြစ်ပေးခဲ့ရသည်။
အီဆာ အကြီး ကဲ့သို့သော သူများသည် ထိုခေတ် ထိုနေရာများတွင်သာ ရှိသည် မဟုတ်။ နေရာတိုင်းတွင် ရှိတတ်သည်။ မည်သည့်တိုင်းပြည်တွင်မဆို ရှိနေနိုင်သည်။ ထိုသူကဲ့သို့သောသူများအား ကျွန်ုပ်လည်းကြုံခဲ့ဖူးသည်။ တွေ့ကြုံနေရဆဲဖြစ်သည်။ သင်လည်း တွေ့ကြုံရနိုင်သည်။ ဘင်ဂူရီယံ ကဲ့သို့ အမြော်အမြင်ရှိရှိ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်တတ်သူများ၏ ကွပ်ညှပ်ဆောင်ရွက်မှုများဖြင့်သာလျှင့် ထိုသို့သော သူများကို ဆိုရွားခွင့်မရနိုင်အောင် တားဆီးနိုင်မည် ဖြစ်လေသည်။
ထို့အပြင် လက်ရှိ မြို့ပေါ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရဖူးသော နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှုအချို့ကို ချင့်တွက်ကြည့်ပါလည်း၊ သေနတ်ကိုင်ထားပြီး ကျည်ဆံ အလွဲသုံးစားလုပ်တတ်သူများကြားမှာသာဆိုလျှင် အသတ်ခံရပြီး ဖြစ်နေလိမ့်မည် ဟုပင် တစ်ခါတစ်ခါ တွေးမိနိုင်လေသည်။
(၆) ဘင်ဂျမင်၏ အခန်းကဏ္ဍ
ဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ် ၏ ခြေလေးချောင်းတော်လှန်ရေး ၀တ္တုအား အထက်တန်း၊ တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားကြသည်။
အင်္ဂလိပ်စာပေအား အမေရိကန်အထက်တန်းကျောင်းများအချို့တွင် သင်ကြားပေးရစဉ်က Animal Farm အား ပြဌာန်းစာအုပ်အနေဖြင့် နှစ်စဉ်သင်ကြားပေးရသူ အင်္ဂလိပ်စာဆရာမ ပေါ်လင်းဟော့ကင်းစ် (Pauline Hawkins) က “ခြေလေးချောင်းတော်လှန်ရေး အားဖြင့် ရရှိလာသော လွတ်လပ်ခွင့်များ ရပိုင်ခွင့်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည့် ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင် အကြောင်းကို ရေးသားပါ” ဆိုသည့် မေးခွန်းကို မေးမြန်းလျက် ကျောင်းသားများအား ယူဆချက်ရေးသားခိုင်းလေ့ရှိသည်။ ဆရာမလက်ခံရရှိသော အဖြေများအနက် ဆရာမ အလေးအနက်ထားမိသော (၁၄ နှစ်သား ကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြေဆိုသည့်) အဖြေတစ်ခု ဤသို့ဆိုသည်။
ဇာတ်လမ်းအစပိုင်းမှ အဆုံးအထိ – တော်လှန်ရေးအစပြုသည်မှစ၍ ဗန္ဓုလ (Nepoleon) အမည်ရ ၀က်ခေါင်းဆောင် က အာဏာရှင်ဖြစ်လာသည်အထိ – အချင်းအရာများကို ကောင်းစွာသိရှိ မှတ်မိသည့် “မဟော်” (Benjamin) အမည်ရ လား ဇာတ်ကောင် မှာ တာဝန်အများကြီး ရှိသည် ဟူသတတ်။ အခြေအနေများမှာ မကောင်းသောဘက်သို့ လမ်းကြောင်း တိမ်းစောင်းသွားနေသည်ကို ကောင်းစွာ သိပါလျက် စ-လယ်-ဆုံး ဘာကိုမှ မှတ်ချက်ပြု ၀င်မပြောခဲ့သူ မဆန့်ကျင်ရဲခဲ့သူ မြည်း မဟော်မှာ တာဝန်အများကြီး ရှိပါသည် ဟူသတတ်။
တိရိစ္ဆာန်တို့ အဖွဲ့အစည်း၏ လက်ရှိနှင့် ရေရှည်ကောင်းကျိုးအတွက် မဟော် က ထောက်ပြပြောဆိုမှု တစ်ခုခု လုပ်လျှင် တန်ပြန်ခံစားရမည့် အမှောင်ဂိုဏ်းသားများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကို မဟော် မှာ ခံနိုင်ရည် ရှိဟန်မတူချေ။ သူကား သိသူ ဖြစ်လေသည်။ ပြောသူလည်း မဟုတ်၊ လုပ်ဆေင်သူလည်း မဟုတ်ချေ။ အနက်ရောင်ဂိုဏ်းသားများ အားမကောင်းသေးခင်ကာလကပင် သူ့အနေနှင့် ထောက်ပြထိန်းညှိမှုများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လျှင် အချိန်မီကောင်းမီခဲ့ပါလိမ့်မည်။ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လုံးတွင် သူ၏တစ်ခုတည်းသော အရေးယူ တုံ့ပြန်လှုပ်ရှားမှုမှာ ဇာတ်လမ်းဆုံးခါနီးကျမှ သူ၏ အချစ်ခင်ရဆုံး မိတ်ဆွေ နွားကြီး ဂျိုကား အား သားသတ်ရုံကားပေါ်မှ ခုန်ချရန်အတွက် ကားနောက်မှလိုက်ပြေး အော်ပြောခဲ့မှု ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူ့မိတ်ဆွေ၏အသက်ကိုကား မကယ်တင်နိုင် ခဲ့တော့ချေ။
တိုင်းပြည်၏ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်သည့် အလုပ်သမားလူတန်းစားကို ကိုယ်စားပြုသည့် နွားကြီး ဂျိုကား နှုတ်က မချသည့် ဆောင်ပုဒ်နှစ်ခု ဖြစ်သည့် “ငါ ပိုပြီး ကြိုးစား အလုပ်လုပ်မယ်” နှင့် “ဗန္ဓုလ အမြဲမှန်သည်” တို့မှာ အုပ်ချုပ်ခံ တိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့၏ အသိဥာဏ် နုန့်နဲ့မှုကို ညွှန်းဆိုပြလေသည်။ နွားကြီး ဂျိုကားနှင့်တကွသော အုပ်ချုပ်ခံ တိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့အား လမ်းညွှန်ပြရန်မှာ ဇာတ်လမ်းထဲရှိ တစ်ကောင်တည်းသော အသိဥာဏ်ရှိ အုပ်ချုပ်ခံဖြစ်သည့် လား မဟော် တွင် တာဝန်ရှိသည် ဟု ယူဆနိုင်လေသည်။ မဟော်က လမ်းမှန်ရာကို ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်ရာကို ပြောပြဖို့ကြိုးစားတိုင်း အမှောင်ဂိုဏ်းသားများ၏ ငြိုငြင်ခြင်းခံရမည်ကို စိုးရိမ်မိပေလိမ့်မည်။ အသက်အန္တရယ် ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းကို သော်လည်းကောင်း ခံကောင်းခံရမည်ကို စိုးရိမ်ခဲ့ပေလိမ့်မည်။
သို့ရာတွင် ပြဿနာကား – မှားခြင်း နှင့် မှန်ခြင်း ဟုတ်/မဟုတ်အား သတင်းအချက်အလက် အသေအချာ စေ့စေ့ငုငုမသိရဘဲ လူအများစုတို့က ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြသည် မဟုတ်။ အမှားကိုကျူးလွန်ထားသူ အမှောင်ဂိုဏ်းသားများမူကား အဖြစ်အပျက်များကို ဖုံးကွယ်နိုင်ရန် ကြိုးစားတတ်သည်။ သို့ရာတွင် လူအများစုတို့အနေဖြင့် သိသင့်သိထိုက်သည်ကို သိနိုင်ကြမှသာလျှင် အမှားပြင်ကာလမ်းမှန်ကို လျှောက်လမ်းနိုင်ကြပေလိမ့်မည်။ နှုတ်ဆိတ်နေသော လူများစု (silent majority) ဟူသည် ရှိ၏။ ထိုသူတို့သည် ပါးစပ်အားဖြင့် တုံ့ပြန်ပြောဆိုမှုကိုမပြုတတ်ကြ။ သို့ရာတွင် တရားမှု/မတရားမှု ဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည်ကို ကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်လောက်သည့် အချက်အလက်များအား ရရှိပါက မတရားသည့်ဘက်က မရပ်တည်လိုကြပေ။ မတရားသည်ကို မတရား ဟု နှုတ်ဆိတ်နေသော လူများစု သိရှိသွားခြင်းသည် ပင်လျှင် အမှောင်ကွယ်၍ အလင်းကြီးစိုးဖို့ရာ ပထမအဆင့် ဖြစ်လေသည်။
ဆိုဗီယက်နိုင်ငံတည်ထောင်သူ ဖခင်ကြီး လီနင် မသေဆုံးမီ လေဖြတ်ပြီး ကောင်းစွာ မဦးစီးနိုင်တော့သည့် ကာလများတွင် ဇနီးအကူအညီဖြင့် ရေးသားခဲ့သည့် လီနင်၏ သုံးသပ်ထွက်ဆိုချက် (Lenin’s Statement) တစ်နည်းအားဖြင့် လီနင်၏ သေတမ်းစာကို လီနင်၏ ဆန္ဒအရဆိုလျှင် ပါတီကွန်ကရက် တက်ရောက်လာသူအားလုံးအား ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေရမည်ဖြစ်လေသည်။ ထို လီနင်၏သေတမ်းစာ ရေးသားထားချက်များထဲတွင် – စတာလင်မှာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိရာထူးဖြစ်သည့် ပါတီ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ရာထူးနေရာမှ ဖယ်ရှားပစ်သင့်ကြောင်း အစရှိသည့် မှတ်ချက်များပါရှိသည်။ ထိုအချက်များကိုသာ ပါတီကွန်ကရက်ကိုယ်စားလှယ်များကသာ ဖတ်ရှုရပါက စတာလင်အနေဖြင့် လီနင်ကို ဆက်ခံပြီး ဆိုဗီယက်ယူနီယံကိုအုပ်ချုပ်သူ ဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်း လုံးဝမရှိပေ။ သို့ရာတွင် ထိုသေတမ်းစာကို ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကသာလျှင် အကန့်အသတ်ဖြင့် သိရှိပြီး ကျန်သူများကောင်းစွာ မသိနိုင်အောင် အခြေအနေကို စတာလင်က ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် နောင်တွင် အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း စတာလင်မှာ ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ အာဏာရှင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဟိုးယခင်လက်ဝဲသမားတို့အခေါ်အဝေါ်အတိုင်းဆိုလျှင် “ဝေဖန်ရေး နှင့် မိမိကိုယ်ကို ဝေဖန်ရေး” (တစ်နည်းအားဖြင့် ပြန်လှန်သုံးသပ်မှု review) အား အဖွဲ့အစည်းအကျိုးအလို့ငှာ ပြုသင့်ပြုထိုက်ပေသည်။ အနာအိုင်း ဖြစ်နေသည်ကို အနာအိုင်း ဖြစ်နေသည် ဟု အသိပေးနိုင်မှသာ အချိန်မီ ဆေးကုနိုင်ပေမည်။ သို့မှသာ ကျန်းမာသော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ပေမည်။
ယခုဆွေးနွေးနေကြသည့် သင်ခန်းစာများကိုယခုမှ ရသည်မဟုတ်။ ခေတ်အဆက်ဆက် တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်ကို သုံးသပ်ကောက်နှုတ်ပြီးသကာလ ဤလက္ခဏာများ ပြနေလျှင် ဤရောဂါများဖြစ်တတ်ကြောင်း ရှေးလူများက အတွေ့အကြုံဖြင့် ရင်းကာ သင်ခန်းစာထုတ်နှုတ်ပြခဲ့ပြီးကြလေပြီ။ မိမိတို့က ထုတ်နှုတ်ယူကာ အသုံးချတတ်ရန် သာဖြစ်လေသည်။
ကျွန်တော့်အမြင်အရဆိုလျှင် တော်လှန်ရေးလမ်းမချော်သွားဖို့ ထိန်းကျောင်းသွားရန်မှာ လား မဟော် (Benjamin) တစ်ကောင်တည်း၏ တာဝန်မဟုတ်၊ တော်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်ကြသူ အားလုံး၏ တာဝန်ပင် ဖြစ်လသည်။
၂၃ ဧပြီလ ၂၀၁၇-ခုနှစ်
၁၃း၄၀ နာရီ
“ကဲ့ယူသော နှားနို့တို့အားဖွငျ့ အာဏာရှငျလောငျး ဝကျသညျ ခှေးပေါကျကိုးကောငျအား မှေးမွူထားလရော၊ နောကျပိုငျးတှငျ ကွီးမားထှားကွိုငျးလာသော အဆိုပါခှေးကွီးကိုးကောငျကို မဏ်ဍိုငျပွုလကျြ ထိုဝကျသညျ ခွလေေးခြောငျးကှငျးတှငျ အာဏာရှငျဖွဈသှားလသေညျ။” ဤသညျမှာ “ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေး” ဝတ်တု အား ရှုထောငျ့တဈရပျမှ ကွညျ့မွငျလကျြ စာတဈကွောငျးတညျးဖွငျ့ အကဉျြးခြုပျကွညျ့ခွငျး ဖွဈလသေညျ။
(၂) တျောလှနျရေးတို့ လမျးခြျောသောအခါ . . .
လူမြိုးတဈမြိုး၏ လှတျမွောကျရေးတိုကျပှဲသညျ ရရှေညျတညျဆောကျရသော ခရီးရှညျ ဖွဈလသေညျ။ မဟာဗြူဟာမွောကျရညျမှနျးခကျြတို့ဆီ ဦးတညျခြီတကျရငျး နညျးဗြူဟာမြား ကဏ်ဍအလိုကျ ဖှငျ့ကာ တညျဆောကျ ခြီတကျကွရသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ လီနငျ၏ အယူအဆအတိုငျးဆိုရလြှငျ ပါလီမနျအခနျးကဏ်ဍ၊ အလုပျသမားလှုပျရှားမှု၊ လကျနကျကိုငျတပျတညျဆောကျမှု တို့မှာ သီးခွားနညျးဗြူဟာမြားဖွဈသျောလညျး မဟာဗြူဟာမွောကျ ရညျမှနျးခကျြတဈခုတညျးသို့ ဦးတညျ ခြီတကျနခွေငျး ဖွဈလသေညျ။
ပွီးသျောတဖနျ ထိုမှတဈဆငျ့ အောကျသို့ထပျဆငျ့ခှဲစဉျးစားလိုကျလြှငျ မိမိတို့လူမြိုးတဈမြိုးလုံး၏ လှတျမွောကျရေးတိုကျပှဲတှငျ ကြှနျတျောအပါအဝငျ လူပုဂ်ဂိုလျတဈဦးခငျြးစီ၏ အခနျးကဏ်ဍတို့မှာ ပိုမိုသေးငယျသော လကျအောကျခံ အကွောငျးအရာမြားသာလြှငျ ဖွဈကွသညျ ဟု ယူဆနိုငျလသေညျ။
ကြှနျတေျာ့၏ ယခုအသကျမှာ (၄၄) နှဈ ဖွဈသညျ့အတှကျ ကံကောငျးထောကျမစှာ ကနျြးမာအသကျရှညျပါက နောကျထပျ အနှဈ (၂၀) ကောငျးစှာ အလုပျလုပျနိုငျဦးမညျ ဟု မြှျောလငျ့နိုငျ၏။ မိမိအကောငျးဆုံး အလုပျလုပျပေးနိုငျမညျ့ အခနျးကဏ်ဍမြားတှငျ မသမေီအခြိနျအထိ ပါဝငျထမျးဆောငျခဲ့ရနျ စိတျကရညျသနျ ထားပါ၏။ အမြိုးသား ရညျမှနျးခကျြဆီသို့ ကနနေ့ကျဖွနျ ခကျြခငျြးရောကျနိုငျမညျ မရောကျနိုငျမညျကိုကား တပျအပျသခြော မပွောနိုငျပါသျောငွားလညျး၊ ပိုမိုကောငျးမှနျသော အနအေထား မိမိတို့ရညျမှနျးခကျြနှငျ့ ပိုမိုနီးစပျသော အနအေထား ကနျြရဈခဲ့လြှငျ သရေကြိုးနပျသညျ ဟု ဆိုနိုငျလသေညျ။
တိုတောငျးသော လူ့ဘဝ နှငျ့ ရရှေညျဖွဈသော တျောလှနျရေး၏ ခရီးရှညျကို တှေးတောဆငျခွငျရငျး၊ တျောလှနျရေးတို့၏ သဘောသဘာဝကို မိမိနားလညျးနိုငျသလောကျ ဖတျရှုဆညျးပူးဖူးသညျတို့ထဲမှ မြှဝသေငျ့သညျတို့အား မြှဝကွေညျ့ရနျ စဉျးစားကွညျ့ရာ၊ ဂြော့ချြအျောဝဲလျ ရေးသားခဲ့သော ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေး စာအုပျအား အခွခေံ၍ တျောလှနျရေးတို့ လမျးခြျောတတျခွငျး အကွောငျးအရာ ကို ဆောငျးပါးပွု၍ ဤတှငျရေးသားအပျလသေညျ။ ထိုစာအုပျကို ဖတျရှုလကျြ ဖွဈပျေါမိသော မေးခှနျးမြားကို စတငျဆှေးနှေးလိုပါသညျ။
ကနဦးမေးခှနျး။ ။ တျောလှနျရေးတို့သညျ မိမိတို့၏ မူရငျးရညျရှယျခကျြတို့မှ အဘယျကွောငျ့ ရံဖနျရံခါ လမျးခြျောသှားကာ၊ အဟောငျးသော အာဏာရှငျမြားကို တျောလှနျသူမြားထဲမှ အခြို့သညျ အဘယျကွောငျ့ အသဈသော အာဏာရှငျမြား ဖွဈလာတတျကွသနညျး။
ထိုမေးခှနျးနှဈခုကို ဖွဆေိုဖို့ကွိုးစားရငျး ထပျဆငျ့မေးခှနျးမြား ပျေါပေါကျလာလသေညျ။
ဒုတိယမေးခှနျး။ ။ လူသားတို့သညျပငျလြှငျ ပငျကိုယျအားဖွငျ့ မကောငျးသညျ့ဘကျသို့ ပကျြစီးသညျ့ဘကျသို့ သှားလိုသညျ့ အလေးကဲသလော။ သို့တညျးမဟုတျ အာဏာသညျပငျလြှငျ လူသားတို့အား ပကျြစီးစတေတျသလော။
တတိယမေးခှနျး။ ။ လူ့အဖှဲ့အစညျးတို့လညျပတျမှုအတှကျ မဖွဈမနလေိုအပျသညျ့ အာဏာ နှငျ့ ထိုအာဏာအားဖွငျ့ အကငျြ့ပကျြခွစားခွငျးတို့အား မညျကဲ့သို့ ထိနျးခြုပျကနျ့သတျမညျနညျး။
စတုတ်ထမေးခှနျး။ ။ နုနယျသောတျောလှနျရေး အဖှဲ့အစညျးမြားတှငျ အဖှဲ့အစညျး၏ ရရှေညျရညျမှနျးခကျြမြားကို ရညျမှနျးဆောကျရှကျရမညျ့အစား မိမိတို့အစုအဖှဲ့အဖို့အာဏာစုစညျးမှု နှငျ့ အကငျြ့ပကျြခွစားမှု တို့အား အစဉျတစိုကျဆောငျရှကျနမှေုတို့ ဖွဈပျေါလာတတျကွလရော၊ ယငျးတို့ကို မညျကဲ့သို့ တှနျးလှနျခဖြေကျြ ကွမညျ နညျး။
ပဉ်စမမေးခှနျး။ ။ အကငျြ့ပကျြခွစားသူမြားအဖို့ သူတို့၏ခွစားမှုအကွောငျးကို လူမသိလကေောငျးလေ ဖွဈသညျ့အတှကျ တတျနိုငျသမြှ သတငျးအမှောငျခထြားရနျ ကွိုးစားတတျကွလရော (သို့တညျးမဟုတျ သတငျးမှားဖွနျ့ခြိမှုအားဖွငျ့ မကောငျးမှုတို့အား ကာကှယျလုပျဆောငျတတျကွလရော)၊ ကနျြးမာစှာလညျပတျသောအဖှဲ့အစညျးတဈခု ဖွဈစရေေးအတှကျ ဝဖေနျရေး နှငျ့ မိမိကိုယျကိုဝဖေနျရေး တို့အား မညျသညျ့ အတိုငျးအတာအထိ ကငျြ့သုံးရမညျနညျး။ (ယခငျ လကျဝဲဝါဒီတို့က “ဝဖေနျရေး နှငျ့ မိမိကိုယျကို ဝဖေနျရေး” ဟု သုံးနှုနျးတတျကွပွီး ခတျေပျေါစကားအရ ဆိုလြှငျ ပွနျလှနျသုံးသပျခွငျး (review) ပငျ ဖွဈလသေညျ)။
ဆဋ်ဌမမေးခှနျး။ ။ အဖှဲ့အစညျးအတှငျး အားပွိုငျမှုမြားတှငျ ခွစားသညျ့အုပျစုသညျ ခွမစားသူပွိုငျဘကျမြားအား တညျရှိနသေညျ့ ခွိမျးခွောကျမှုမြားအဖွဈရှုမွငျသညျ့အတှကျ ခွမစားသူပွိုငျဘကျမြားအား ခမြှေုနျးသုတျသငျရာ၌ သစ်စာဖောကျမြား၊ သတငျးပေးမြား၊ တဈဖကျသူလြှိုမြား စသညျဖွငျ့ တံဆိပျကပျကာ စှပျစှဲသုတျသငျတတျလရော၊ ထိုအဖွဈဆိုးမြား မဖွဈရလအေောငျ အတတျနိုငျဆုံး မညျကဲ့သို့ ထိနျးသိမျးကွ မညျနညျး။
သတ်တမမေးခှနျး။ ။ တျောလှနျရေးအဖှဲ့အစညျးတဈခုအတှငျး အထကျဖျောပွပါ အပွဈအနာအဆာမြား ကွီးထှားရငျ့မာလာကာအဖှဲ့အစညျးအား လှမျးမိုးခြုပျကိုငျသှားသညျ့အခွအေနသေို့ ရောကျမသှားစဖေို့ ထိမျးသိနျးစောငျ့ရှောကျကွရနျ မညျသူတို့မှာ တာဝနျရှိသနညျး။
အထကျဖျောပွပါမေးခှနျး ခုနဈခုတို့အနကျ ကနဦးပငျမ ပထမ မေးခှနျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ယူဂိုဆလပျကှနျမွူနဈ ခေါငျးဆောငျဟောငျးနှငျ့ ကှနျမွူနဈဝါဒကို ဝဖေနျသူ အတိုကျအခံ (ကှယျလှနျသူ) မီလိုဗနျ ဒဂြီးလတျဈ က “လူတနျးစားသဈ (The New Class: An Analysis of the Communist System)” အမညျရ သူ၏စာအုပျတှငျ သုံးသပျရေးသားဖူးသညျ။ ဖိနှိပျသူလူတနျးစားအဟောငျးအားတျောလှနျခဲ့သညျဆိုပါမှ၊ တျောလှနျရေးအောငျမွငျပွီးသညျ့အခြိနျတှငျ အာဏာရ ကှနျမွူနဈခေါငျးဆောငျမြားသညျ တိုငျးပွညျကို အာဏာရှငျဆနျဆနျအုပျခြုပျသညျ့ အခှငျ့ထူးခံ အုပျခြုပျသူလူတနျးစားသဈ တဈရပျ ဖွဈလာကွောငျးကို ရေးသားထားသညျ။ ပညာရပျဆနျသညျ့ ထိုစာအုပျအကွောငျးကိုတော့ အကယျြမပွောတော့ပါ။
အထကျဖျောပွပါမေးခှနျး ခုနဈခုစလုံးအား တှေးတောသုံးသပျစရာ ခေါငျးစဉျမြားအဖွဈ ပျေါထှနျးစသေညျ့ စာအုပျတဈအုပျမှာ ဂြော့ချြ အျောဝဲလျ (George Orwell) ၏ Animal Farm စာအုပျ ဖွဈသညျ။
ဂြော့(ချြ)အျောဝဲလျ ရေးသားသော Animal Farm အမညျရ ဝတ်တုလတျမှာ အင်ျဂလိပျစာပတှေငျ ဂန်တဝငျ တနျးဝငျအဖွဈသတျမှတျတနျဖိုးထားခွငျးခံရသညျ့ နိုငျငံရေးသရျေျာစာဆနျဆနျ ပုံနှိုငျးဝတ်တု ဖွဈလသေညျ။ ဟိုးယခငျကာလတုနျးက ထိုဝတ်တုလတျအား သခငျဘသောငျးက “ခွလေေးခြောငျး တျောလှနျရေး” အမညျဖွငျ့ ဘာသာပွနျလကျြ ဘာသာပွနျစာပအေသငျးက ထုတျဝဖေူးလသေညျ။ ထိုစာအုပျမှာ အိမျက မိဘတို့၏ စာအုပျစငျတှငျ ရှိသဖွငျ့ ငယျစဉျ ငါးတနျး ခွောကျတနျးကြောငျးသား အရှယျကတညျးက မိမိ ဖတျဖူးလသေညျ။
အဆိုပါ ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေး ဝတ်တုက တငျပွထားသညျမှာ – ရညျရှယျခကျြကောငျးတို့ဖွငျ့ တျောလှနျခဲ့ကွသျောလညျး မသမာသူ နိုငျငံရေးသမားမြားက တျောလှနျရေးအတှငျး မသိမသာ အခှငျ့အရေးယူရငျး အာဏာရှငျစနဈကို တညျဆောကျကွသဖွငျ့ မိမိတို့အားလုံးမှာ အာဏာရှငျလကျသဈလကျအောကျသို့ ကရြောကျသှားရသညျ့ ဖွဈအငျအား တိရိစ်ဆာနျဇာတျကောငျမြားဖွငျ့ ဇာတျကှကျဖျောတငျပွထားခွငျးဖွဈလသေညျ။ ဆိုဗီယကျနိုငျငံတှငျ စတာလငျ တဈယောကျ အာဏာရှငျ ဖွဈလာပုံသညျ ဤဝတ်တုက ကြောရိုးယူထားသညျ့ နောကျခံ အကွောငျးအရာ ဖွဈသညျ။
ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေး စာအုပျပါ ဇာတျလမျးအကဉျြးကား ဤသို့ ဖွဈလသေညျ။
လယျသမား ဦးသာခေါငျ (Mr. Jones) ပိုငျဆိုငျသညျ့ ယငျးမာပငျကှငျး (Manor Farm) တှငျ နှား၊ ကွကျ၊ ဝကျ၊ မွညျး၊ မွငျး၊ ဆိတျ၊ ဘဲ၊ ခှေး စသညျ့ တိရိစ်ဆာနျမြိုးစုံ ရှိကွလသေညျ။ ပေါ့လြော့တတျလကျြ ဝီရိယအားနညျးသညျ့ ဦးသာခေါငျတဈယောကျ ထနျးရညျမူးပွီး အိပျနသေညျ့ တဈညသော ကာလတှငျ ကှငျးအတှငျးရှိ တိရိစ်ဆာနျပေါငျးစုံတို့သညျ “ဗိုလျကွီး” အမညျရ ဝကျအိုကွီး ထံသှားရောကျပွီးလြှငျ တျောလှနျရေးတရား နာကွားကွသညျ။
ယငျးမာပငျကှငျးအပါအဝငျ နိုငျငံတဈဝှမျး၏ သာယာဝပွောမှုမှနျသမြှသညျ တိရိစ်တာနျတို့၏လုပျအားဖွငျ့ တညျဆောကျထားခွငျးသာ ဖွဈကွောငျး၊ ပိုငျရှငျလူသားတို့မှာ တိရိစ်ဆာနျတို့အား မတရား ဂုတျသှေးစုပျလကျြ ခမျြးသားကွှယျဝနကွေလကျြ လုပျအားရှငျ တိရိစ်ဆာနျတို့မှာ မသရေုံတမယျ နိမျ့ကသြော အခွအေနတေို့ဖွငျ့ ရှငျသနျ/သဆေုံး နကွေရကွောငျး၊ လူသားတို့ကို သုတျသငျနိုငျမှသာလြှငျ သာယာသော တိရိစ်ဆာနျဘောငျကွီးကို ထူထောငျနိုငျမှာ ဖွဈကွောငျး မွှကျကွားသညျ။ လူသားမြားကိုတျောလှနျသညျ့အခါတှငျလညျး လူသားမြားလို မကငျြ့ကွံကွဖို့၊ တိရိစ်တာနျအခငျြးခငျြး နိုငျထကျစီးနငျးမလုပျကွဖို့ အစရှိသော ကငျြ့ဝတျမြားကို လမျးညှနျသညျ။ “ဒို့ တိရိစ်ဆာနျ သီခငျြး (The Beasts of England)” ကို တိရိစ်ဆာနျအပေါငျးတို့အား သငျကွားပေးသညျ။
အဆိုပါ ဗိုလျကွီး (Major) အမညျရ ဝကျကွီးမှာ ကှယျလှနျပွီးနောကျ လပိုငျးကာလမြားတှငျ ဗန်ဓုလ (Napoleon) နှငျ့ ဘျောဖွူ (Snowball) ဟူသညျ့ ဝကျထီးနှဈကောငျက တိရိစ်ဆာနျမြားအား တျောလှနျရေးတရားမြားကို လြှို့ဝှကျလကျဆငျ့ကမျး သငျကွားပေးသညျ။ တဈရကျတှငျ တိရိစ်ဆာနျမြားသညျ ဦးသာခေါငျနှငျ့ အပေါငျးအပါ လူသားမြားအား တျောလှနျပွီး ယငျးမာပငျကှငျးကို သိမျးပိုကျလိုကျသညျ။ ယငျးမာပငျကှငျးအားလညျး “တိရိစ်ဆာနျကှငျး (Animal Farm)” ဟု အမညျပွောငျးလဲလိုကျကွသညျ။ ကြီထရံတှငျ တိရိစ်ဆာနျဝါဒ၏ အခွခေံအခကျြကွီး ခုနဈရပျကို အက်ခရာတငျကွသညျ။ “တိရိစ်ဆာနျမြားအားလုံး တဈတနျးတစားတညျး ဖွဈသညျ (All animals are equal.)” ဆိုသညျ့အခကျြမှာ အရေးအကွီးဆုံးအခကျြ အနဖွေငျ့ ပါဝငျသညျ။
ဘျောဖွူ က တိရိစ်ဆာနျမြားအား စာရေးစာဖတျနိုငျရနျ သငျကွားပေးသညျ။ ဗန်ဓုလ ကမူ နှားမကွီးမြားထံမှ ရသော နို့မြားကို ကဲ့ယူထားပွီး၊ ခှေးပေါကျကလေးကိုးကောငျကို လြို့ဝှကျတဈနရော၌ ၄ငျး၏ ထိနျးသိမျးမှုအောကျတှငျ သီးခွားထားကာ အဆိုပါ နှားနို့မြားဖွငျ့ ကြှေးမှေး မှေးမွူထားသညျ။ ဝကျမြားမှာ ကောငျးစှာ စီမံခနျ့ခှဲမှု လုပျနိုငျရနျ အလို့ငှာ ဟု အကွောငျးပွလကျြ အစားကောငျးအသောကျကောငျးမြား ရယူကွသညျ။ ဝကျတို့မှာ နို့ နှငျ့ သရကျသီးမှညျ့မြားကို ကနျြးမာရေးအတှကျ စားသုံးကွရနျလိုအပျသညျ ဟု သံကွောငျ (Squealer) အမညျရ ဝကျထီးတဈကောငျအား တိရိစ်ဆာနျမြားထံ စလှေတျ၍ လှညျ့လညျရှငျးပွစသေညျ။ ဦးသာခေါငျအိမျပျေါရှိ အခနျးတဈခနျးကို ဌာနခြုပျပွုလုပျလကျြ ယငျးအခနျးမှနေ၍ ဝကျမြားက စီမံခနျ့ခှဲလုပျဆောငျသညျ။
ကာလအတနျကွာသျော တိရိစ်ဆာနျကှငျးအား လူသားမြားလာရောကျတိုကျခိုကျကွသညျ။ အနီးအနားဝနျးကငျြမှ လယျပိုငျရှငျမြားသညျလညျး တိရိစ်ဆာနျတျောလှနျရေး ကူးစကျလာမညျကိုစိုးရိမျသဖွငျ့ ဦးသာခေါငျနှငျ့ ပူးပေါငျးကာ တိုကျခိုကျပေးကွသညျ။ နှားတငျးကုတျ အနီးမှ ထိုးဖောကျဝငျရောကျမှုကို ဘျောဖွူ ခေါငျးဆောငျကာ ရှပျရှပျခြှံခြှံ ခုခံတိုကျခိုကျကာ တှနျးလှနျလိုကျကွသညျ။ ဘျောဖွူအား တိရိစ်ဆာနျမြား၏ ခဈြခငျလေးစားမှု မွငျ့မားလာသညျ။ အဆိုပါ နှားတငျးကုတျတိုကျပှဲ (The Battle of Cowshed)၏ အောငျမွငျမှုကို နှဈစဉျနှဈတိုငျး သနေတျပဈဖောကျ ပှဲကငျြးပ၍ အောငျပှဲခံကွသညျ။
ဦးဆောငျမှုကဏ်ဍတှငျ ဗန်ဓုလ နှငျ့ ဘျောဖွူတို့၏ အားပွိုငျမှုမှာ မွငျသာလာသညျ။ မီးစကျ တညျဆောကျပွီး တိရိစ်ဆာနျကှငျးအား ခတျေမီသာယာဝပွောစမေညျ့ အစီအမံအား အစညျးအဝေးတှငျ ခကျြကလြကျကြ ဘျောဖွူကတငျပွသညျ။ ဗန်ဓုလက မလုပျသငျ့ဟုသာ ပွောသညျ၊ ပရိတျသတျကို ဆှဲဆောငျနိုငျခွငျးမရှိ။ သို့ရာတှငျ မဲခှဲဆုံးဖွတျခွငျးမပွုမီ ဗန်ဓုလက လကျခေါကျမှုတျလိုကျရာ ခှေးကွီးကိုးကောငျ ဝငျလာပွီး ဘျောဖွူအား ထိုးဟပျတိုကျခိုကျသဖွငျ့ ဘျောဖွူ ထှကျပွေးသှားရသညျ။
ယငျးနောကျပိုငျးတှငျ ကှငျး၏စီမံအုပျခြုပျမှုမြားကို အစညျးအဝေးဖွငျ့ ဆုံးဖွတျခွငျးမပွုတော့ဘဲ ဗန်ဓုလ ခေါငျးဆောငျသညျ့ ဝကျကျောမီတီကသာ ဆုံးဖွတျမညျ ဟု ဗန်ဓုလက မိနျ့ခှနျးခြှသေညျ။ ထိုသညျကို ဝကျလေးကောငျက ကနျ့ကှကျသေးသျောလညျး ခှေးကွီးမြားက ထကာ မနျဖီဟိနျးဟောကျသဖွငျ့ အားလုံးငွိမျနလေိုကျရသညျ။ ခေါငျးဆောငျကွီး ဗန်ဓုလ မှာ တိရိစ်ဆာနျမြားအား ကိုယျတိုငျ စကားထှကျမပွောတော့ပဲ ဝကျ သံကွောငျ မှတဆငျ့သာ ကွျောငွာခကျြမြား အမိနျ့မြား ထုတျပွနျသညျ။
မီးစကျတညျဆောကျရေးကို လုပျဆောငျမညျဟု သံကွောငျက တဆငျ့ ဗန်ဓုလက ကွငွောသညျ။ မီးစကျတညျဆောကျရေးမှာ ဘျောဖွူ၏ အကွံမဟုတျကွောငျး၊ ဗန်ဓုလက စတငျကွံစညျအားထုတျခဲ့သော အမှုသာလြှငျ ဖွဈကွောငျး သံကွောငျက တိရိစ်ဆာနျမြားအား ရှငျးပွသညျ။ မီးစကျလညျပတျလာသညျ့အခါ ဘဝသာယာလာမညျ့အကွောငျး ကတိမြား အပွောမြားကို မြှျောမှနျးရမျးရျောလကျြ၊ အစာလြှော့စားကာ အလုပျပိုလုပျ၍ မီးစကျတညျဆောကျရေးအတှကျ တိရိစ်ဆာနျမြား အားထုတျကွရသညျ။
တဈရကျနတှေ့ငျ မုနျတိုငျးတိုကျလရော မခိုငျခနျ့သော မီးစကျအဆောကျအအုံမှာ ပွားပွားဝပျ ပွိုကသြညျ။ မီးစကျပွိုပကျြရခွငျးမှာ ဘျောဖွူ၏ လကျခကျြဖွဈကွောငျး ဗန်ဓုလနှငျ့ သံကွောငျက တိရိစ်ဆာနျမြားအား အယုံသှငျးသညျ။ ဘျောဖွူကို လူဆိုးဖွဈအောငျ ပုံဖျောသညျသာမက ဘျောဖွူနှငျ့ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျသညျ ဟူသော စှပျစှဲခကျြဖွငျ့ အခွားတိရိစ်ဆာနျမြားစှာကို စှဲခကျြတငျ သတျဖွတျသညျ။ (ဆဋ်ဌမမွောကျ အခွခေံတရား ဖွဈသညျ့ “တိရိစ်ဆာနျအခငျြးခငျြး မသတျဖွတျရ” ဆိုသညျ့အခကျြကို ကြီနံရံတှငျ ညအခြိနျ၌ နှားမ ခှာဖွူ နှငျ့ လား မဟျော တို့ သှားဖတျကွညျ့ကွရာ၊ “အကွောငျးမဲ့” ဆိုသော စကားရပျအားထညျ့သှငျးလကျြ “တိရိစ်ဆာနျအခငျြးခငျြး အကွောငျးမဲ့ မသတျဖွတျရ” ဟု ပွငျရေးထားပွီးဖွဈသညျကို တှရေ့လသေညျ။)
ဒို့တိရိစ်ဆာနျသီခငျြးကို မသီဆိုရ ဟု တားမွဈသညျ။ ယငျးအစား ဗန်ဓုလ ၏ ဘုနျးတျောဘှဲ့သီခငျြးမြားကို သီဆိုစသေညျ။ ဗန်ဓုလ ကိုယျတိုငျမှာမူ လူတဈယောကျပမာ ဇိမျကကြ နထေိုငျ စညျးစိမျခံသညျ။ နှားတငျးကုတျတိုကျပှဲတှငျ ဘျောဖွူ “တိရိစ်ဆာနျဇာနညျ ပထမတနျးဘှဲ့” ရခဲ့သညျဆိုသညျမှာ မဟုတျဘဲ သူရဲဘောကွောငျသောကွောငျ့ ရှုတျခခြွငျးခံခဲ့ရသညျ ဟု တိရိစ်ဆာနျမြားကို အယုံသှငျးသညျ။
အနီးအနားမှ လယျသမားတဈဦးဖွဈသညျ့ ဦးအောငျပနျးနှငျ့ အဖှဲ့သညျ တိရိစ်ဆာနျမြားဆောကျနသေညျ့ ဓါတျမီးစကျကို ဒိုငျးနမိုကျဖွငျ့ လာရောကျဖောကျခှဲဖွဈလိုကျကွသညျ။ ထိုသူတို့အား မောငျးထုတျနိုငျခဲ့သျောလညျး မိမိတို့ တိရိစ်ဆာနျမြားစှာ ဒဏျရာရကနျြခဲ့ကွရာ၊ ဒဏျရာရသူမြားထဲတှငျ အဓိက တိရိစ်ဆာနျလုပျအားရှငျ နှားကွီး “ဂြိုကား” (မူရငျး အင်ျဂလိပျဘာသာမူတှငျ မွငျးကွီး Boxer) လညျး အပါအဝငျ ဖွဈသညျ။
ဒဏျရာပငျရသျောငွားလညျး နှားကွီး ဂြိုကားမှာ ၄ငျး၏ ဆောငျပုဒျ နှဈခုဖွဈသညျ့ “ငါ အလုပျကို ပိုကွိုးစားလုပျမယျ” နှငျ့ “ဗန်ဓုလ အမွဲမှနျသညျ” ဆိုသညျ့ ဆောငျပုဒျနှဈရပျကို ပါးစပျကမခပြွောရငျး အလုပျကို ကွိုးစားသထကျကွိုးစားလုပျကိုငျလရော၊ ဘုနျးဘုနျးလဲသညျ့ အခွအေနသေို့ ရောကျသှားလသေညျ။ ထိုအခါ ဗန်ဓုလ၏ အမိနျ့ဖွငျ့ ရှာသဈကွီးဆေးရုံသို့ ပို့ရနျ စီစဉျကွလသေညျ။ ဆေးရုံသို့ပို့မညျ့ကားပျေါသို့ ဂြိုကားကို တကျစပွေီးနောကျ ကားကို စမောငျးထှကျသှားသညျ့အခါကမြှ စာကောငျးစှာဖတျတတျသညျ့ လား မဟျော က ကားနံဘေး စာမြားကို ဖတျကွညျ့ရာ၊ “ရှာသဈကွီး သားသတျကုမ်ပဏီ၊ သားရနှေငျ့ အမဲရိုးရောငျးသူမြား” ဟု ဖွဈနသေဖွငျ့ တိရိစ်ဆာနျမြားအား ဖတျပွသညျ။ မဟျော နှငျ့ တိရိစ်ဆာနျမြားက ဂြိုကားရေ နငျ့ကို သတျတော့မယျ ခုနျခြ ခနျြခြ ဟု အျောဟဈသဖွငျ့ ဂြိုကားက တဝုနျးဝုနျးကနျကြောကျကာ ဆငျးပွေးနိုငျရနျ ကွိုးစားသျောလညျး အားမတနျဘဲ လိုကျပါသှားရသညျ။
ပိုငျရှငျဟောငျး ဦးသာခေါငျနသေညျ့ အိမျတှငျ ဝကျမြားတကျနကွေနသေညျမှာ ကွာခဲ့ပွီ။ ယခုနာမညျ “တိရိစ်ဆာနျကှငျး” အား တျောလှနျးမတိုငျမီ ယခငျမူလနာမညျ “ယငျးမာပငျကှငျး” အဖွဈသို့ ပွနျလညျ ပွောငျးလဲ သတျမှတျသညျ။ ဓါတျမီးစကျ တဈလုံးမက တညျဆောကျပွီး ကှငျး၏ ဝငျငှလေညျးတိုးတကျလာသျောလညျး ဝကျမြား နှငျ့ ခှေးမြားမှလှဲ၍ ကနျြတိရိစ်ဆာနျမြားမှာ ပငျးပနျးကွီးစှာ အလုပျလုပျကွရသညျ။ ဝကျမြားနှငျ့ ခှေးမြားမှာ ဆူဖွိုးသထကျ ဆူဖွိုးလာကွသညျ။ “ခွလေေးခြောငျးကောငျးတယျ။ ခွနှေဈခြောငျးမကောငျးဘူး” ဆိုသော ဆောငျပုဒျ အစား “ခွလေေးခြောငျးကောငျးတယျ။ ခွနှေဈခြောငျးက ပိုကောငျးတယျ” ဟူသောဆောငျပုဒျကို ဆိုကွရသညျ။ ဝကျတို့သညျ ခွနှေဈခြောငျးထောကျ၍ လမျးလြှောကျကွပွီး လူအဝတျအစားဝတျကာ ကှငျးထဲတှငျ သှားလာကွသညျ။ ဝကျခေါငျးဆောငျမြားသညျ နံဘေးကှငျးမြားမှ လယျသမားမြား နှငျ့ ရောငျးဝယျဖေါကျကားကွသညျ။ ဦးသာခေါငျနခေဲ့သညျ့အိမျပျေါတှငျ ဝကျမြားနှငျ့ လူမြား ပါတီပှဲခကြာ အရကျသောကျဖဲရိုကျကွသညျ။ ထိုဖွဈအငျမြားကို ကနျြတိရိစ်ဆာနျမြားက ငေးမော၍ သာ ကွညျ့နကွေရတော့သညျ။
ပိုငျရှငျဟောငျး ဦးသာခေါငျလကျထကျက ပိုမိုပငျပနျးခြို့တဲ့သလား၊ ဝကျမြားအုပျခြုပျသညျ့ ဤကာလတှငျမှ ပိုမို ပငျပနျးခြို့တဲ့သလား ဆိုသညျကို မှတျဉာဏျကောငျး၊ စာဖတျတတျ၊ ဉာဏျပညာရှိသညျ့ လား တိရိစ်ဆာနျ မဟျော (မူရငျး အင်ျဂလိပျမူတှငျ မွညျး တိရိစ်ဆာနျ Benjamin) ကလှဲ၍ မညျသညျ့ တိရိစ်ဆာနျကမှ မမှတျမိကွတော့ခြေ။
ဖွတျသနျးခဲ့သညျ့နှဈကာလမြားအတှငျး အခွခေံမူကွီး ခုနဈခကျြကိုလညျး တိရိစ်ဆာနျမြားအိပျကွသညျ့ ညအခြိနျကမြှ ဝကျ သံကွောငျက လှကေား နှငျ့ ဆေးဗူး ယူပွီး၊ ကြီနံရံပျေါတှငျ ဟိုခါ ပွငျရေးလိုကျ သညျခါ ဖကျြရေးလိုကျနှငျ့ပငျ အခွခေံမူအခကျြ ခုနှဈခကျြအနကျ အခကျြနံပါတျ(၇) တဈခကျြတညျးသာ ကနျြတော့သညျ။ တိုတဈခကျြကို ပငျလြှငျလညျး ပွနျပွငျ ရေးသားထားကွောငျးတှရေ့လသေညျ။
နှာမအိုကွီး ခှာဖွူ သညျ အခွခေံမူကွီး ခုနဈခကျြအား ရှဖွေ့ဈဟောငျးအောကျမဖှေ့ယျ ပွနျဖတျခငျြသဖွငျ့ စာဖတျတတျသော လား မဟျောကို အတူချေါသှား၍ ဖတျပွခိုငျးရာ မဟျော မှာ စိတျမခမျြးမွစှေ့ာဖွငျ့ ဖတျပွရလသေညျ။ ခုနဈခကျြထဲမှာ တဈခကျြတညျးကနျြတော့သညျ။ ယခငျ မူရငျး အခွခေံမူအခကျြနံပါတျ(၇) မှာ “တိရိစ်ဆာနျမြားအားလုံး တဈတနျးတစားတညျး ဖွဈသညျ (All animals are equal.)” ဟု ဖွဈသျောလညျး၊ ယခုကနျြတော့သညျ့ ထိုအခကျြနံပါတျ (၇) တဈခကျြတညျးကိုပငျလြှငျ အောကျပါအတိုငျး ပွောငျးလဲ ရေးသားထားလသေညျ။
“အားလုံးသော တိရိစ်ဆာနျတို့မှာ တနျးတူ ဖွဈသညျ။ သို့ရာတှငျ အခြို့တိရိစ်ဆာနျတို့မှာ ပို၍တနျးတူ ဖွဈပွီးလြှငျ၊ အခြို့တိရိစ်ဆာနျတို့မှာ လြော့၍ တနျးတူ ဖွဈသညျ။ (All animals are equal but some animals are more equal than others.)”
(၄) နှားနို့ပြောကျသညျ့ကိစ်စ နှငျ့ ခှေးကိုးကောငျ
“ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေး” အမညျဖွငျ့ သခငျဘသောငျးဘာသာပွနျသညျ့စာအုပျတှငျ နှားနို့ကိစ်စအား ဗန်ဓုလ က ထိနျးခြုပျကိုငျတှယျသှားပုံကို အောကျပါအတိုငျးရေးသား တငျပွထားသညျ။
“ထိုအခိုကျတှငျ နို့ညှဈနှားမကွီး သုံးကောငျမှာ မအီမသာဖွဈနေ၍ ပွငျးထနျစှာ အျောလကျြရှိကွသညျ။ ဦးသာခေါငျ ရှိစဉျက မနကျတိုငျး နို့ညှဈသျောလညျး ဦးသာခေါငျကို တျောလှနျလိုကျပွီးနောကျ လှတျလပျခွငျးရ၍ ဘယျသူမှ နို့ညှဈမညျ့သူ မရှိသဖွငျ့ နို့တှတေောငျ့ပွီး နို့အုံကွီးတှေ ကှဲမတတျဖွဈကာ မခြိမဆနျ့ ဖွဈနကွေသညျ။ ခဏတာမြှတှေ၍ ဖွဈနကွေပွီးလြှငျ ဝကျမြားက အကွံရ၍ နို့ပုံးမြားကို ယူစပွေီးနောကျ ခှာကွားနှငျ့ ညှပျ၍ နို့ညှဈကွရာ အတျောကလေး ဟနျသညျ။ မကွာမီ ပုံးငါးပုံးနှငျ့ အပွညျ့ရ၍ အားလုံးသော တိရိစ်ဆာနျတို့ သှားရညျတမြားမြား ဖွဈနကွေသညျ။
“ဒီနို့တှေ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ။ ဦးသာခေါငျရှိတုနျးကတော့ တဈခါတလေ ဒို့စားတဲ့ အစာထဲထညျ့ကြှေးတယျ” ဟု တိရိစ်ဆာနျတဈကောငျကပွောသညျ။ ထိုအခါ ဗန်ဓုလက နို့ပုံးမြားရှတှေ့ငျ ရပျ၍ “ရဲဘျောတို့၊ ဒီနို့အတှကျဟာ ကိစ်စ မရှိပါဘူး။ ငါကွညျ့ပွီး စီမံပါ့မယျ။ စပါးရိတျဖို့က ပိုအရေးကွီးပါတယျ။ ရဲဘျော ဘျောဖွူနောကျကို လိုကျကွပါ။ ငါ အခုပဲ လိုကျလာခဲ့ပါ့မယျ။ ကိုငျး . . . သှားကွပတေော့။ အရိတျနောကျသှားကရြငျ စပါးတှေ ပကျြကုနျမယျ” ဟု ဆိုသညျ။
အားလုံးသော တိရိစ်ဆာနျတို့လညျး ဗန်ဓုလပွောသညျ့အတိုငျး ဘျောဖွူကို ခေါငျးဆောငျပွု၍ စပါးရိတျသှား ကွ သညျ။ ညနေ စပါးရိတျပွီး ပွနျလာကွသောအခါ နို့ပုံးမြားကို မတှကွေ့ရတော့။”
အထကျတှငျဖျောပွထားသညျ့အတိုငျး နစေ့ဉျထှကျရှိနသေညျ့ နှားနို့ကိစ်စကို ကိုငျတှယျထိနျးခြုပျလိုကျမှုသညျ ဗန်ဓုလ၏ အာဏာရှငျစနဈ တညျဆောကျမှုတှငျ ကနဦးဆုံးအဆငျ့ ဖွဈလသေညျ။ ထိုနှားနို့တို့ကို ဗန်ဓုလသညျ မိမိကိုယျတိုငျ စားသုံးသညျ့အပွငျ မိမိကိုသစ်စာခံအောငျ ခှေးပေါကျကလေးမြားအား ကြှေးမှေးပြိုးထောငျရာ၌ ထိုနှားနို့မြားကို အသုံးခခြဲ့လသေညျ။ လမြားအကွာတှငျ ထိုခှေးပေါကျကလေးကိုးကောငျမှာ ဆူဖွိုးလာလကျြ ခှေးကွီးကိုးကောငျ ဖွဈလာသညျ။ တိရိစ်ဆာနျကှငျး၏ ကောငျးရာကောငျးကြိုး ဆောငျရှကျနသေူဖွဈသျောလညျး ခေါငျးဆောငျမှုတှငျ မိမိနှငျ့ပွိုငျဘကျပမာဖွဈနသေူ ဘျောဖွူအား မောငျးထုတျရနျနှငျ့ အခွားတိရိစ်ဆာနျမြားအပျေါ အကွောကျတရားဖွငျ့ လှမျးမိုးထားနိုငျအောငျ ဗန်ဓုလက ခှေးကိုးကောငျကို အသုံးခလြကျြ ခြုပျကိုငျနိုငျခဲ့သညျ။
အပျေါက ပုံပမာထဲက နှားနို့ဆိုသညျကား အခှငျ့အရေးအကြိုးစီးပှားတို့အား အလင်ျကာပွု ဆိုလိုရငျးဖွဈလသေညျ။ ယခုခတျေတှငျ နားလညျလှယျအောငျပွောရလြှငျ အသငျးအဖှဲ့ပိုငျ ဘဏ်ဍာငှမြေားကို ကိုငျတှယျစီမံပိုငျခှငျ့ လညျး ဖွဈနိုငျသညျ။ ဒါမှမဟုတျ လမျးအဆောကျအအုံစသညျ့ ပွညျသူ့လုပျငနျး ဆောကျလုပျခှငျ့ ကနျထရိုကျလညျး ဖွဈနိုငျသညျ။ ဒါမှမဟုတျ ငွိမျးခမျြးရေး ကားပါမဈမြားလညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျလသေညျ။ အခြို့ခေါငျးဆောငျမြားသညျ ထိုအခှငျ့အရေး (incentive) မြားအား တပညျ့ငယျသားအဖွဈခံယူသူမြားကို ထပျဆငျ့ခပြေးခွငျးအားဖွငျ့ အိမျကွီးထဲတှငျ အိမျငယျဆောကျကာ မိမိအုပျစုတညျး ဟူသော အငျအားစုကို တညျဆောကျတတျကွလသေညျ။
တဈခါတဈခါ ပွောတတျကွလသေညျ။ နှားနို့ တဈဗူးနှဈဗူး ပြောကျတာ ဘာမှ ရေးကွီးခှငျကယျြကိစ်စ မဟုတျဘူး ဟု ဆိုတတျကွလသေညျ။ နှားနို့ပြောကျသညျ့ကိစ်စမှာ ပမာဏအားဖွငျ့ သေးငယျလြှငျ အရေးမကွီး ဟု ဆိုကောငျးဆိုလို့ ရနိုငျသညျ။ သို့ရာတှငျ ထိုနှားနို့မြားအား အသုံးခလြကျြ အဖှဲ့အစညျး ပကျြစီးရာပကျြစီးကွောငျးအား (တနညျး၊ အဖှဲ့အစညျးအတှငျး လူပုဂ်ဂိုလျဗဟိုပွုအာဏာရှငျစနဈအား) မညျကဲ့သို့ ဦးတညျ တညျဆောကျနသေနညျး ဆိုသညျ့အခကျြက ပိုမို အရေးကွီးလသေညျ။ ကိစ်စကို ငယျနုစဉျက ကိုငျတှယျသျော နိုငျနငျးနိုငျသျောလညျး၊ ဘာမှမဟုတျပါဘူး ဟုလှတျထားကာ ရောဂါရငျ့သောအခါကမြှ ကိုငျတှယျလြှငျ မနိုငျနငျး မတားဆီးနိုငျတော့ပေ။
ခှေးကိုးကောငျ မှာ စတာလငျ၏ လြှို့ဝှကျပုလိပျအဖှဲ့ကို အလင်ျကာပွုထငျဟပျပွလသေညျ။ ထို့အပွငျ ယဉျကြေးမှုတျောလှနျရေးကာလ မျောစီတုနျး အသုံးခခြဲ့သော တပျနီလူငယျမြားကို မွငျယောငျကွညျ့ နိုငျလသေညျ။ သို့တညျးမဟုတျ ခေါငျးဆောငျတဈဦးတဈယောကျ ပါတီတဈသငျးတဈဖှဲ့ကို မှားမှားမှနျမှနျ ထောကျခံလကျြ တဈဖကျသားမြားကို အပုတျခတြိုကျခိုကျတတျသညျ့ ခတျေသဈ လျောဘီ အခြို့သညျ ပငျလညျး ဤအမြိုးအစား၏ လက်ခဏာပါရှိနသေညျ ဟု ဆိုနိုငျလသေညျ။
လကျဝဲဆနျသညျ့ ခေါငျးဆောငျအခြို့က ၄ငျးတို့၏ငယျသားမြားအားသငျကွားတတျသညျ့ အယူအဆတဈခုမှာ – ပွိုငျဘကျ (သို့မဟုတျ၊ သဘောထားခငျြး မတူသူ) မြားအား ပုတျခတျခွငျး တိုကျခိုကျခွငျး ခွိမျးခွောကျခွငျး သညျပငျလြှငျ တျောလှနျရေးတာဝနျ ထမျးဆောငျခွငျးပငျ ဖွဈသညျ ဟု သငျကွားတတျကွ လသေညျ။
တျောလှနျရေးအတှကျ သစ်စာရှိရှိ လုပျဆောငျနသေူမြားအား တျောလှနျရေးကို သစ်စာဖောကျနသေူမြားက သစ်စာဖောကျ ဟု စှပျစှဲကာ သုတျသငျကွသညျ့ ဖွဈစဉျမြားသညျ သမိုငျး၏ ဟိုအကှေ့ သညျအကှမြေ့ားတှငျ ရှိတတျလသေညျ။
၁၉၈၈ လူထုအရေးတျောပုံနောကျပိုငျး စဈတပျအာဏာသိမျးလိုကျသဖွငျ့ မိမိထကျ အသကျ သုံးလေးငါးနှဈ ကွီးသညျ့ တက်ကသိုလျကြောငျးသား ရာပေါငျးမြားစှာတို့ နယျစပျဒသေမြားသို့ တိမျးရှောငျ ထှကျပွေးခဲ့ကွရာမှ စုစညျးပျေါပေါကျလာသညျ့ ABSDF ကြောငျးသားတပျမတျော အတှငျးတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အဖှဲ့အစညျးအတှငျး ဖွုတျထုတျသတျ ဖွဈရပျကွီးမှာ ယနထေ့ကျတိုငျ သှေးစကျမြားမခွောကျသေး ဟု ဆိုနိုငျလသေညျ။
၁၉၉၂-ခုနှဈခနျ့တှငျ တရုတျနယျစပျ ကခငျြဒသေတှငျးတဈနရော ပါဂြောငျဒသေအခွစေိုကျ ABSDF ကြောငျးသားတပျ အဖှဲ့ခှဲအတှငျး အဖှဲ့တှငျးအားပွိုငျကွရာမှ လူမြားပွီးအုပျစီးနိုငျသညျ့အဖှဲ့က ကနျြအနညျးစုအား သစ်စာဖောကျ ဟု စှပျစှဲ နှိပျစကျ သတျဖွတျခဲ့ကွသညျကို ကနဦးတှငျ ဖုံးဖိထားကွရာမှ နောငျတှငျ ဟိုးလေးတကွျော ပျေါထှကျလာခဲ့သညျ။
စုစုပေါငျးမှ ၃၅၀-၄၀၀ ခနျ့ရှိသညျ့ ကြောငျးသားတပျဖှဲ့အတှငျး သုံးပုံတဈပုံခနျ့ဖွဈသညျ့ ကြောငျးသားရဲဘျော (၁၀၇) ဦးအား စဈထောကျလှမျးရေးမြားဖွဈကွသညျ ဟု စှပျစှဲကာ လူမဆနျသော နညျးလမျးပေါငျးစုံဖွငျ့ နှိပျစကျခဲ့ကွသညျ။ အကဉျြးခြ နှိပျစကျခံရသူမြားထဲမှ (၃၆) ဦးမှာ သတျဖွတျခွငျးခံရသညျ၊ သို့မဟုတျ နှိပျစကျမှုဒဏျ ကွောငျ့ သဆေုံးခဲ့ကွရသညျ။ ကြောငျးသူ ရဲမေ တဈဦးအားနှိပျစကျ သတျဖွတျခဲ့ကွပုံမှာ စာတငျ၍ မရေးခငျြလောကျအောငျ ရကျစကျကွမျးကွုတျခဲ့ကွသညျ။
အလားတူ နောကျထပျဖွဈရပျတဈခုမှာ အီဆာ အကွီး ကိစ်စ ဖွဈသညျ။ အစ်စရေးနိုငျငံထူထောငျသညျနှငျ့ အစ်စရေးစဈဘကျဆိုငျရာ ထောကျလှမျးရေးတပျဖှဲ့၏ ပထမဆုံး အကွီးအကဲအဖွဈ ခနျ့အပျခွငျးခံရသညျ့ အီဆာ အကွီး (Big Isser သို့မဟုတျ Isser Be’eri) မှာ ပွိုငျဘကျမြားနှငျ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးပွဿနာရှိသူမြားကို သစ်စာဖောကျ သတငျးပေး ဟုစှပျစှဲကာ လုပျကွံခွငျး ကှပျမကျြခွငျးတို့ကို လုပျဆောငျခဲ့သူဖွဈသညျ။ အပွဈမရှိသညျ့ အစ်စရေးစဈဗိုလျ ကပ်ပတိနျ Tubiansky အား အာရပျသတငျးပေး ဟု စှပျစှဲပွီး တဈနာရီမြှ အကဉျြးရုံးစဈဆေးကာ (အပွဈမရှိ ဟု သူကိုယျတိုငျ သိရကျသားနှငျ့) သဒေဏျခြ ပဈသတျကှပျမကျြခဲ့သညျ။ အာရပျဖကျမှသတငျးမြားကို မိမိတို့ဘကျသို့ပေးနသေူ သတငျးပေး Ali Kassem အား အလုပျသဘောအရ မညျသညျ့မှားယှငျးမှု မညျသညျ့ပွဈခကျြမှမရှိဘဲ လုပျကွံသတျဖွတျခိုငျးခဲ့သညျ။ နောကျ ရကျသတ်တပတျ အနညျးငယျအကွာတှငျ ဝနျကွီးခြုပျ ဘငျဂူရီယံ၏ မိတျဆှေ မာပိုငျးပါတီခေါငျးဆောငျတဈဦးဖွဈသညျ့ Abba Hushi ကိုပငျ သကျသမြေား အခိုငျအမာပွလကျြ ဗွိတိသြှ သူလြှို ဟုစှပျစှဲသညျ။ သူကိုယျတိုငျ ခိုငျးစပွေုလုပျခိုငျးခဲ့သညျ့ သံကွိုးစာအတုကို သကျသအေဖွဈ တငျပွသညျ။ စှပျစှဲခံရသူ၏မိတျဆှတေဈဦးကို ရကျပေါငျး ခုနဈဆယျကြျောမြှ ဖမျးဆီးနှိပျစကျပွီး ထိုခေါငျးဆောငျမှာ ဗွိတိသြှသူလြှို ဖွဈကွောငျးထှကျဆိုစခေဲ့သညျ။ စုံစမျးစဈဆေးမှုမြားလုပျပွီးနောကျပိုငျး တှရှေိခကျြမြားအရ၊ ဆိုဗီယကျကှနျမွူနဈ ထောကျလှမျးရေး KGB နညျးလမျးမြားဖွဈသညျ့ ထောငျခြောကျဆငျစှပျစှဲခွငျး၊ အတုပွုလုပျစှပျစှဲခွငျး၊ နှိပျစကျမေးမွနျးခွငျး တို့အားကငျြ့သုံးကာ ပုဂ်ဂိုလျရေးသွဇာ အား ခြဲ့ထှငျတညျဆောကျ သညျ့ အီဆာ အကွီး အား စဈခုံရုံးတငျ အပွဈပေးခဲ့ရသညျ။
အီဆာ အကွီး ကဲ့သို့သော သူမြားသညျ ထိုခတျေ ထိုနရောမြားတှငျသာ ရှိသညျ မဟုတျ။ နရောတိုငျးတှငျ ရှိတတျသညျ။ မညျသညျ့တိုငျးပွညျတှငျမဆို ရှိနနေိုငျသညျ။ ထိုသူကဲ့သို့သောသူမြားအား ကြှနျုပျလညျးကွုံခဲ့ဖူးသညျ။ တှကွေုံ့နရေဆဲဖွဈသညျ။ သငျလညျး တှကွေုံ့ရနိုငျသညျ။ ဘငျဂူရီယံ ကဲ့သို့ အမွျောအမွငျရှိရှိ ဆုံးဖွတျလုပျကိုငျတတျသူမြား၏ ကှပျညှပျဆောငျရှကျမှုမြားဖွငျ့သာလြှငျ့ ထိုသို့သော သူမြားကို ဆိုရှားခှငျ့မရနိုငျအောငျ တားဆီးနိုငျမညျ ဖွဈလသေညျ။
ထို့အပွငျ လကျရှိ မွို့ပျေါနိုငျငံရေးလှုပျရှားသူမြားကိုယျတိုငျခံစားခဲ့ရဖူးသော နိုငျငံရေးလုပျကွံမှုအခြို့ကို ခငျြ့တှကျကွညျ့ပါလညျး၊ သနေတျကိုငျထားပွီး ကညျြဆံ အလှဲသုံးစားလုပျတတျသူမြားကွားမှာသာဆိုလြှငျ အသတျခံရပွီး ဖွဈနလေိမျ့မညျ ဟုပငျ တဈခါတဈခါ တှေးမိနိုငျလသေညျ။
(၆) ဘငျဂမြငျ၏ အခနျးကဏ်ဍ
ဂြော့ချြအျောဝဲလျ ၏ ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေး ဝတ်တုအား အထကျတနျး၊ တက်ကသိုလျ အင်ျဂလိပျစာ သငျရိုးညှနျးတမျးမြားတှငျ ထညျ့သှငျးသငျကွားကွသညျ။
အင်ျဂလိပျစာပအေား အမရေိကနျအထကျတနျးကြောငျးမြားအခြို့တှငျ သငျကွားပေးရစဉျက Animal Farm အား ပွဌာနျးစာအုပျအနဖွေငျ့ နှဈစဉျသငျကွားပေးရသူ အင်ျဂလိပျစာဆရာမ ပျေါလငျးဟော့ကငျးဈ (Pauline Hawkins) က “ခွလေေးခြောငျးတျောလှနျရေး အားဖွငျ့ ရရှိလာသော လှတျလပျခှငျ့မြား ရပိုငျခှငျ့မြား ပကျြစီးဆုံးရှုံးသှားခဲ့ရခွငျးအတှကျ တာဝနျရှိသညျ့ ဇာတျကောငျတဈကောငျ အကွောငျးကို ရေးသားပါ” ဆိုသညျ့ မေးခှနျးကို မေးမွနျးလကျြ ကြောငျးသားမြားအား ယူဆခကျြရေးသားခိုငျးလရှေိ့သညျ။ ဆရာမလကျခံရရှိသော အဖွမြေားအနကျ ဆရာမ အလေးအနကျထားမိသော (၁၄ နှဈသား ကြောငျးသားတဈဦး ဖွဆေိုသညျ့) အဖွတေဈခု ဤသို့ဆိုသညျ။
ဇာတျလမျးအစပိုငျးမှ အဆုံးအထိ – တျောလှနျရေးအစပွုသညျမှစ၍ ဗန်ဓုလ (Nepoleon) အမညျရ ဝကျခေါငျးဆောငျ က အာဏာရှငျဖွဈလာသညျအထိ – အခငျြးအရာမြားကို ကောငျးစှာသိရှိ မှတျမိသညျ့ “မဟျော” (Benjamin) အမညျရ လား ဇာတျကောငျ မှာ တာဝနျအမြားကွီး ရှိသညျ ဟူသတတျ။ အခွအေနမြေားမှာ မကောငျးသောဘကျသို့ လမျးကွောငျး တိမျးစောငျးသှားနသေညျကို ကောငျးစှာ သိပါလကျြ စ-လယျ-ဆုံး ဘာကိုမှ မှတျခကျြပွု ဝငျမပွောခဲ့သူ မဆနျ့ကငျြရဲခဲ့သူ မွညျး မဟျောမှာ တာဝနျအမြားကွီး ရှိပါသညျ ဟူသတတျ။
တိရိစ်ဆာနျတို့ အဖှဲ့အစညျး၏ လကျရှိနှငျ့ ရရှေညျကောငျးကြိုးအတှကျ မဟျော က ထောကျပွပွောဆိုမှု တဈခုခု လုပျလြှငျ တနျပွနျခံစားရမညျ့ အမှောငျဂိုဏျးသားမြား၏ တိုကျခိုကျမှုကို မဟျော မှာ ခံနိုငျရညျ ရှိဟနျမတူခြေ။ သူကား သိသူ ဖွဈလသေညျ။ ပွောသူလညျး မဟုတျ၊ လုပျဆငျေသူလညျး မဟုတျခြေ။ အနကျရောငျဂိုဏျးသားမြား အားမကောငျးသေးခငျကာလကပငျ သူ့အနနှေငျ့ ထောကျပွထိနျးညှိမှုမြားပွုလုပျနိုငျခဲ့လြှငျ အခြိနျမီကောငျးမီခဲ့ပါလိမျ့မညျ။ ဇာတျလမျးတဈပုဒျလုံးတှငျ သူ၏တဈခုတညျးသော အရေးယူ တုံ့ပွနျလှုပျရှားမှုမှာ ဇာတျလမျးဆုံးခါနီးကမြှ သူ၏ အခဈြခငျရဆုံး မိတျဆှေ နှားကွီး ဂြိုကား အား သားသတျရုံကားပျေါမှ ခုနျခရြနျအတှကျ ကားနောကျမှလိုကျပွေး အျောပွောခဲ့မှု ဖွဈသညျ။ သို့ရာတှငျ သူ့မိတျဆှေ၏အသကျကိုကား မကယျတငျနိုငျ ခဲ့တော့ခြေ။
တိုငျးပွညျ၏ကုနျထုတျလုပျရေးတာဝနျကို ထမျးဆောငျသညျ့ အလုပျသမားလူတနျးစားကို ကိုယျစားပွုသညျ့ နှားကွီး ဂြိုကား နှုတျက မခသြညျ့ ဆောငျပုဒျနှဈခု ဖွဈသညျ့ “ငါ ပိုပွီး ကွိုးစား အလုပျလုပျမယျ” နှငျ့ “ဗန်ဓုလ အမွဲမှနျသညျ” တို့မှာ အုပျခြုပျခံ တိရိစ်ဆာနျအပေါငျးတို့၏ အသိဉာဏျ နုနျ့နဲ့မှုကို ညှနျးဆိုပွလသေညျ။ နှားကွီး ဂြိုကားနှငျ့တကှသော အုပျခြုပျခံ တိရိစ်ဆာနျအပေါငျးတို့အား လမျးညှနျပွရနျမှာ ဇာတျလမျးထဲရှိ တဈကောငျတညျးသော အသိဉာဏျရှိ အုပျခြုပျခံဖွဈသညျ့ လား မဟျော တှငျ တာဝနျရှိသညျ ဟု ယူဆနိုငျလသေညျ။ မဟျောက လမျးမှနျရာကို ဖွဈသငျ့ဖွဈထိုကျရာကို ပွောပွဖို့ကွိုးစားတိုငျး အမှောငျဂိုဏျးသားမြား၏ ငွိုငွငျခွငျးခံရမညျကို စိုးရိမျမိပလေိမျ့မညျ။ အသကျအန်တရယျ ခွိမျးခွောကျခွငျးကိုသျောလညျးကောငျး သတျဖွတျခံရခွငျးကို သျောလညျးကောငျး ခံကောငျးခံရမညျကို စိုးရိမျခဲ့ပလေိမျ့မညျ။
သို့ရာတှငျ ပွဿနာကား – မှားခွငျး နှငျ့ မှနျခွငျး ဟုတျ/မဟုတျအား သတငျးအခကျြအလကျ အသအေခြာ စစေ့ငေု့ငုမသိရဘဲ လူအမြားစုတို့က ဆုံးဖွတျနိုငျကွသညျ မဟုတျ။ အမှားကိုကြူးလှနျထားသူ အမှောငျဂိုဏျးသားမြားမူကား အဖွဈအပကျြမြားကို ဖုံးကှယျနိုငျရနျ ကွိုးစားတတျသညျ။ သို့ရာတှငျ လူအမြားစုတို့အနဖွေငျ့ သိသငျ့သိထိုကျသညျကို သိနိုငျကွမှသာလြှငျ အမှားပွငျကာလမျးမှနျကို လြှောကျလမျးနိုငျကွပလေိမျ့မညျ။ နှုတျဆိတျနသေော လူမြားစု (silent majority) ဟူသညျ ရှိ၏။ ထိုသူတို့သညျ ပါးစပျအားဖွငျ့ တုံ့ပွနျပွောဆိုမှုကိုမပွုတတျကွ။ သို့ရာတှငျ တရားမှု/မတရားမှု ဟုတျမဟုတျဆိုသညျကို ကောငျးစှာခှဲခွားနိုငျလောကျသညျ့ အခကျြအလကျမြားအား ရရှိပါက မတရားသညျ့ဘကျက မရပျတညျလိုကွပေ။ မတရားသညျကို မတရား ဟု နှုတျဆိတျနသေော လူမြားစု သိရှိသှားခွငျးသညျ ပငျလြှငျ အမှောငျကှယျ၍ အလငျးကွီးစိုးဖို့ရာ ပထမအဆငျ့ ဖွဈလသေညျ။
ဆိုဗီယကျနိုငျငံတညျထောငျသူ ဖခငျကွီး လီနငျ မသဆေုံးမီ လဖွေတျပွီး ကောငျးစှာ မဦးစီးနိုငျတော့သညျ့ ကာလမြားတှငျ ဇနီးအကူအညီဖွငျ့ ရေးသားခဲ့သညျ့ လီနငျ၏ သုံးသပျထှကျဆိုခကျြ (Lenin’s Statement) တဈနညျးအားဖွငျ့ လီနငျ၏ သတေမျးစာကို လီနငျ၏ ဆန်ဒအရဆိုလြှငျ ပါတီကှနျကရကျ တကျရောကျလာသူအားလုံးအား ဖတျရှုနိုငျရနျ ပုံနှိပျဖွနျ့ဝရေမညျဖွဈလသေညျ။ ထို လီနငျ၏သတေမျးစာ ရေးသားထားခကျြမြားထဲတှငျ – စတာလငျမှာ ရကျစကျကွမျးကွုတျသူဖွဈကွောငျး လကျရှိရာထူးဖွဈသညျ့ ပါတီ၏အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ရာထူးနရောမှ ဖယျရှားပဈသငျ့ကွောငျး အစရှိသညျ့ မှတျခကျြမြားပါရှိသညျ။ ထိုအခကျြမြားကိုသာ ပါတီကှနျကရကျကိုယျစားလှယျမြားကသာ ဖတျရှုရပါက စတာလငျအနဖွေငျ့ လီနငျကို ဆကျခံပွီး ဆိုဗီယကျယူနီယံကိုအုပျခြုပျသူ ဖွဈလာနိုငျစရာအကွောငျး လုံးဝမရှိပေ။ သို့ရာတှငျ ထိုသတေမျးစာကို ထိပျပိုငျးခေါငျးဆောငျမြားကသာလြှငျ အကနျ့အသတျဖွငျ့ သိရှိပွီး ကနျြသူမြားကောငျးစှာ မသိနိုငျအောငျ အခွအေနကေို စတာလငျက ထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့သညျ။ သို့ဖွငျ့ နောငျတှငျ အားလုံးသိကွသညျ့အတိုငျး စတာလငျမှာ ဆိုဗီယကျယူနီယံ၏ အာဏာရှငျ ဖွဈလာခဲ့သညျ။
ဟိုးယခငျလကျဝဲသမားတို့အချေါအဝျေါအတိုငျးဆိုလြှငျ “ဝဖေနျရေး နှငျ့ မိမိကိုယျကို ဝဖေနျရေး” (တဈနညျးအားဖွငျ့ ပွနျလှနျသုံးသပျမှု review) အား အဖှဲ့အစညျးအကြိုးအလို့ငှာ ပွုသငျ့ပွုထိုကျပသေညျ။ အနာအိုငျး ဖွဈနသေညျကို အနာအိုငျး ဖွဈနသေညျ ဟု အသိပေးနိုငျမှသာ အခြိနျမီ ဆေးကုနိုငျပမေညျ။ သို့မှသာ ကနျြးမာသော အဖှဲ့အစညျးအဖွဈ ရပျတညျနိုငျပမေညျ။
ယခုဆှေးနှေးနကွေသညျ့ သငျခနျးစာမြားကိုယခုမှ ရသညျမဟုတျ။ ခတျေအဆကျဆကျ တှကွေုံ့ခဲ့ရသညျကို သုံးသပျကောကျနှုတျပွီးသကာလ ဤလက်ခဏာမြား ပွနလြှေငျ ဤရောဂါမြားဖွဈတတျကွောငျး ရှေးလူမြားက အတှအေ့ကွုံဖွငျ့ ရငျးကာ သငျခနျးစာထုတျနှုတျပွခဲ့ပွီးကွလပွေီ။ မိမိတို့က ထုတျနှုတျယူကာ အသုံးခတြတျရနျ သာဖွဈလသေညျ။
ကြှနျတေျာ့အမွငျအရဆိုလြှငျ တျောလှနျရေးလမျးမခြျောသှားဖို့ ထိနျးကြောငျးသှားရနျမှာ လား မဟျော (Benjamin) တဈကောငျတညျး၏ တာဝနျမဟုတျ၊ တျောလှနျရေးတှငျပါဝငျကွသူ အားလုံး၏ တာဝနျပငျ ဖွဈလသညျ။
၂၃ ဧပွီလ ၂၀၁၇-ခုနှဈ
Previous ကုလားကိုယျစားလှယျ အစိုးရ ရဲ့ မယေုအကျဖျအမျ
Next ပငျလုံစာခြုပျရဲ့အနှဈသာရကို မမကွေ့ဖို့လိုတယျ